ArCADia BIM - Altermativa i-Revit - Geofumadas
I-ARCADIA BIM - Altermativa i-Revit
Meyi, 2018 Ezahlukeneyo
[isihloko esilandelayo =] ArCADia 10 ″]
Ngaba ndifuna ubuchwepheshe be-BIM namhlanje?
Igama elithi Ukwakhiwa kweModeli yoLwakhiwo (i-BIM), njengoko kuchaziwe kwi-Wikipedia, kukuphawula ulwazi malunga nolwakhiwo kunye nezakhiwo. Nangona eli gama sele liqhelekile kutshanje, abantu abaninzi abasayiqondi kakuhle le nto kuba ukutolika kunye neenkcazo ziyahluka. Abanye bakholelwa ukuba yingqondo yesoftware enceda uyilo. Abanye bacinga ukuba yimodeli yokwakha eyakhiwe kwihlabathi elibonakalayo. Inkcazo edla ngokusetyenziswa yindawo yogcino lwedatha apho igcinwe khona idatha yolwakhiwo. Kithina, ingcinga esondele kwinyaniso yinkcazelo yeli gama njengenkqubo apho indima ebaluleke kakhulu idlalwa ngentsebenziswano nonxibelelwano phakathi kwabathathi-nxaxheba. Le nkqubo ibandakanya uyilo nolwakhiwo lwesakhiwo okanye ulwakhiwo, emva koko ulawulo kunye nolondolozo kude kudilizwe. Isekwe kwindalo edityanisiweyo yemodeli egqibeleleyo, ebonakalayo, "ephilayo" yesakhiwo apho bonke abathathi-nxaxheba babandakanyeka kwitekhontrakthi ngendlela yokokuthi bongeze izinto ezilandelanayo kwilayibrari yolwazi. Abalingane bayo ikakhulu: abatyali mali, abakhi bezinto zokwakha, abakhi kunye nabafaki, ikhontraktha nomphathi wokwakha. Nangona kunjalo, kubalulekile ukugxininisa ukuba eyona nto ibalulekileyo ye-BIM kukubonisa imodeli yesakhiwo sonke endaweni yokuyisebenzisa kumzi-mveliso omnye, nokuba yayiyimveliso eyakhayo yobugcisa kwinkqubo yoyilo.
Xa sithetha nabaxumi bethu, sifumana izimvo ezahlukeneyo malunga nomsebenzi womyili. Rhoqo siva, "Kutheni ndityala ixesha lam elinqabileyo kwinto ethile yobugcisa, kuba kude kube ngoku bendilawula kakuhle kuyilo lweprojekthi ngohlobo lomzobo weCAD, hayi imodeli yokwakha kubuchwephesha beBIM. ? »Ngokuchanekileyo-kude kube ngoku. Mhlawumbi amashumishumi eminyaka eyadlulayo, abaqulunqi bayithetha into enye, baxhoma ibhodi yomzobo kwaye bajonga ngokungathandabuzekiyo koogxa babo ababehleli phambi kwezikrini zekhompyuter inenkqubo ye-CAD ifakiwe, ingeyiyo inomdla kwaye inzima, ekwakheni imivimbo efunekayo Ulwazi oluninzi kunye nexesha. Kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo, ikhompyutha yoyisa ibhodi yomzobo ngenxa yokuba ngeli xesha ehlawula izabelo zomqambi xa eza kuhlela umzobo okanye awuphindaphinde kwiikopi ezilandelayo. Kule mihla wonke umntu ucinga ikhompyuter njengento ebonakalayo emsebenzini woMyili okanye uNonjineli. Ukuba asiqhubeki phambili kwaye siqhubeke kunye nokurejista, kungekudala siya kufumanisa ukuba uloliwe weetekhnoloji entsha uhamba ngokukhawuleza kakhulu ukuba angabamba. Namhlanje akukho mntu ucinga ukwenza umzobo weCAD kwibhodi yokuzoba. Abaqulunqi banayo isoftware yanamhlanje enesimo esibonakalayo esilula nesibonakalayo esele saziwa ngumsebenzisi wokusebenzisa izixhobo eziqhelekileyo zekhompyuter kwaye ngokwemikhwa yazo ayihambelani nesoftware ye-CAD.
Umzekelo omhle weli yiinkampani zethu ze-ArCADia BIM, eziqulunqwe ngeenkqubo ezizinikezelwe kumashishini ahlukeneyo yoyilo. Nabo kunokwenzeka ukudibanisa nokukhululeka kokusetyenziswa kunye nokusebenza okuphezulu kwenkqubo, kwaye, ngokungathandabuzeki, abasebenzisi abaphoqelekanga ukuba bachithe ixesha elide ekufundeni isofthiwe entsha esisebenzisa iteknoloji ye-BIM. Ekucingeni kwethu ngamathuba kunye neenzuzo ze-teknoloji ye-BIM, sigxininisa kakhulu intsebenziswano phakathi kwabaqulunqi bamashishini ahlukeneyo. Siyakholelwa ukuba ukuthetha ngokufanelekileyo phakathi kwabo kunye nokuqonda ngokufanelekileyo iimfuno zabo kuyisisiseko kwimpumelelo yexesha elizayo kwindlela entsha yokuyila. Ukusebenza okwangoku okwakhiwa kubangela ukungaphumeleli okukhulu kwindlela yokuyila kunye nokubonakala kwezinto ezingalindelekanga ezibonakalayo kuphela kwisiza sokwakha, kwaye ngenxa yoko iindleko zotyalo-mali zanda kwinqanaba lokugqibela.
Phakathi abayili kukho inkolelo yokuba ukuphunyezwa uyilo BIM iyabiza, kwaye ukuba ukusetyenziswa BIM ngu installers nabakhi ichaphazela ezingeyomfuneko yaye kakubi isizathu ixabiso iprojekthi inokuba ukuba mali ukhethe isisombululo kubiza yemveli . Akukho nto ingaba yinyani kwi nyaniso. Ngokubhekiselele kutyalo-mali lwehlabathi, iintlawulo zemali ziya kuba zibalaseleyo kwaye umsebenzi womyili (okanye kufuneka ukuba) uqinisekise ukuba umtyalo-mali ukuba angaziqondi kakuhle kwaye angazi. Siyabulela kwisisombululo esisekelwe kwi-BIM, uza kufumana iphrojekthi epheleleyo necacileyo ye3D. Oku kuya kuba neenkcukacha ezipheleleyo kwaye zihlaziywa rhoqo kwizakhiwo zesakhiwo: i-volumetry, izixhobo, izixhobo, ukusetyenziswa kwempahla kunye nezindleko zokwakha, kuxhomekeke kwiinguqu ezenziwe ngexesha loyilo nokuphunyezwa kweprojekthi. Siyabulela kulo mzekelo, sinokukulandelela lula umphumo weenguqu kwiindleko zokugqibela.
Le 3D model sakhiwo unika umyili ikhono ukuhlola ngokuchanekileyo zonke iinkcukacha, kunye nento yokuba le nkqubo ivumela iimpazamo bamba kwezigaba, nasiphi na isakhiwo enokwenzeka ingxaki iza ziphelisiwe kwinqanaba kuyilo, okt phambi ezibonakalayo, ukugcina ixesha nemali. Izinzuzo ezongezelelweyo zemali ezilindelekileyo zikulindele kwisigaba sokusebenza sakhiwo. Isiphambili sempumelelo asikho isoftware ngokwakho kodwa ulwazi olufaka kuyo ngexesha loyilo, ukwakhiwa kwaye emva kokugqitywa, okuza kukuvumela ukuba uphathe kakuhle isakhiwo kwaye unciphise iindleko zokugcina. kulo lonke ujikelezo lobomi.
Inkqubo ye-ArCADia BIM iyayiqwalasela yonke imiba yeprojekthi yokwakha kwaye iquka izixhobo zoshishino ngalunye loyilo oluvela kwi-architecture, iplumbing, i-gas, i-telecommunications kunye ne-installers kagesi kubaphicothi-zincwadi bamandla. Isofthiwe ye-ArCADia BIM ifumaneka kuwo wonke umntu. Kubalulekile ukuba ukuthotyelwa kwenkqubo kunye nendlela elayisenisiweyo kunye nobuchwepheshe obusetyenziswayo ngaphandle kwendlela yokukhawulela abayili bemveliso ukuba bakwazi ukufumana nokuthumela iimpawu zabo kunye nemidwebo kwabanye abathathi-nxaxheba kwinkqubo. Kungakhathaliseki ukusebenza kweArCADia BIM, bonke abaqulunqi banokufikelela kwi-data epheleleyo yesakhiwo sakhiwo, kwaye banokudlulisa okanye ukuthumela izinto ezizenzekelayo kwizicelo zesithathu ezisetyenzisiweyo.
Yintoni iArCADia 10?
I-ArCADia yinkqubo exhasa i-2D kunye ne-3D yoyilo. Ngenxa yefilosofi esebenzayo kunye nefomathi efanayo yokugcina idatha (DWG), iyafana kakhulu neprogram ye-AutoCAD.
Izixhobo eziphambili ze-ArCADia BIM system:
• Esi sixhobo seArCADia sivumela umsebenzisi ukuthelekisa iimveliso ezidalwe kwi-ArCADia BIM kwaye zifumane ukungafani phakathi kwazo.
• Esi sixhobo sivumela ukuba zifake iinkqubo ezininzi zokufakela ezininzi kwixwebhu elilodwa.
ULAWULO LOKUPHATHWA KWEZOKWAKHIWA:
• Ivumela ukulawulwa kweembono kunye nolwazi oluboniswe ngokusebenzisa umthi oyiProjitri yoMthi weProjekthi.
• Umbono we-3D owenziwe ngokuzenzekelayo ufumaneke kwiwindow eyahlukileyo ukuvumela ukubonakaliswa komzimba wonke wesakhiwo okanye, umzekelo, inxalenye yinqanaba.
• Izinto ezifana nezindonga, iifestile, iingcango, njl., Ngoku zifakwe ngokusetyenziswa komsebenzi wokulandelela.
• Ukukhethwa kweendonga zeentlobo ezichaziweyo okanye ukucwangciswa kwanaluphi na udonga oluhlanganisiweyo.
• Ikhathalogu edibeneyo yezinto zokwakha ezisekelwe kumgangatho we-PN-EN 6946 kunye ne-PN-EN ye-12524.
• Ukufakwa kweendonga ezibonakalayo ezingabonakaliyo kwi-3D yangaphambili okanye kwisiqendu. Bahlula indawo yegumbi ukwenzela ukwahlukanisa umsebenzi wendawo evulekile, umzekelo.
• Ubungakanani bokudlulisa ubushushu bubalwe ngokuzenzekelayo ngesiseko sezixhobo ezikhethiweyo kwizahluli zendawo (izindonga, iiplanga kunye nophahla).
• Ukufakwa kweefestile kunye neengcango ngokusebenzisa iiparamitha zethala leencwadi kunye nokudala ii window kunye neengcango ezichazwe ngumsebenzisi.
• Ukukwazi ukuchaza ukutshatyalaliswa (ukwakhiwa) kwefestile yefestile ngaphakathi nangaphandle kwegumbi, kunye nobukhulu bayo.
• Ukukwazi ukukhupha i-sill kwifestile.
• Ukufakwa ngokuzenzekelayo kweepansi (ngokwendlela yesikimu sezinga).
• Imodyuli isetyenziselwa ukulungiselela imidwebo esetyenzisiweyo ekudalweni kweenkqubo zee-Teriva. Imizobo ziquka zonke izinto ezinkulu kwenkqubo: imiqadi yophahla, imiqadi umnqamlezo, imiqadi ezifihlakeleyo, cutouts, KZE kunye nezinto KWE emqadini KZN kunye KWN, inkxaso iigridi kunye nazo zonke izintlu izinto eziyimfuneko ukufihla izinto zidweliswe, zongezwa ngetsimbi eqinisiweyo kunye nekhonkrithi ye-monolithik efunekayo ukudala uphahla.
• ukubala Zenzekelayo uze manual zonke iisilingi Teriva (4.0 / 1, 4.0 / 2, 4.0 / 3, 6,0, 8,0) kwiindawo naluphi na uhlobo eluphahleni.
• Ukusabalalisa ngokuzenzekelayo kwamaplanga, iiplanga ezijikelezayo, iintambo zomngxuma kwiindonga zangaphakathi nangaphandle nakwiiplanga eziphambili.
• Ukulungiswa ngokuzenzekelayo kwenkqubo yokucutshulwa kweendawo zokuvulela kunye nemigqa yokuhlula.
• Isisombululo ngokuzenzekelayo sokufikelela kwipilati yokufikelela eludongeni.
• Ukubalwa kunye nokucwangciswa okuzenzekelayo kweplati kunye nokuhlawula okufunekayo.
• Ukudala ngokuzenzekelayo kwamagumbi avela kwiindonga ezivaliweyo zeendonga kunye neendonga ezibonakalayo.
• Iimfuno zokushisa kunye nezidingo zokukhanyisa zinikezelwa ngokuzenzekelayo kumagumbi, kuxhomekeke ngamagama abo.
• Ukukwazi ukutshintsha umfanekiso ocacileyo wegumbi ekubonweni, umzekelo, ngokugcwalisa okanye kumbala.
• Ukufakwa kwamanyano eManyano, kubandakanya ukuqiniswa okuchazwe kwimivalo yomibini kunye neentshukumo.
• Ukufakwa kwamacolomns egciniweyo kunye ne-elliptical cross section.
• Ukufakwa kwezivulo kwisitya esinye okanye imichiza (amaqela eenkumbi kunye nenani lamakholomu kunye nemigca).
• Ukukwazi ukufaka umbane okanye ukumakisha ukuphuma kwee-chimneys ezikhoyo.
• Iiprofayili ezintsha zethempe.
• Inkcazo yee-ladders ezingasibanga kunye neendidi ezininzi kunye nokunyuka kwezitebhisi nakwephi na isicwangciso.
• Iindidi ezintsha zeesitebhisi: i-monolithic kunye neerungi okanye zibonwe ngezingcingo. Ukukwazi ukukhetha uhlobo kunye neenkalo zesinyathelo.
Ukudala ngokuzenzekelayo imodeli yomhlaba ngokusekelwe kwiindawo eziphakamileyo zeemephu zedijithali kwifomethi ye-DWG.
• Ukufakwa kwendiza yomhlaba usebenzisa iindawo eziphakamileyo zamanqaku okanye imigca.
• Ukufakwa kwezinto ezifanisa izinto zeenethwekhi okanye izinto ezikhoyo kumhlaba ukuqinisekisa ukuba kukho ukudibanisa kwi-design.
• Ukufakela nokuguqulwa koqwalaselo lwekhamera, ukusuka kumbono wombonisi, ongasetyenziswa ukujonga ukuyila okanye ukugcina umbono.
• Ummandla wamanje ungagcinwa kwifayile kwifom ye BMP, JPG okanye iPNG.
AXES A MODULAR:
• Ukukwazi ukufaka i-grid yamanxeba ahambelanayo, kuquka ukukhetha okupheleleyo okukhethwa kukho.
• Ukudalwa kweetayitile zetayitili ezichazwe ngumsebenzisi kwibhokisi yencoko okanye ngokuhlela izicwangciso zemifanekiso.
• Ukufaka iitekisi ezizenzekelayo (ezithathwe kwi-design) okanye ezichazwe ngumsebenzisi kwisihloko sebhloko.
• Gcina iibhloko zetayitile okanye iiprogram zeprojekthi.
• Londoloza ukucwangciswa okuchazwe ngumsebenzisi wezinto (amanqaku, amafonti, iintlobo ezingapheliyo, iziphakamileyo, njl.).
• Umphathi wohlobo usetyenziselwa ukulawula imodeli esetyenziswa kumaxwebhu akhona kwilayibrari yehlabathi. Ukususela ngoku, iyakusindiswa kwiimodeli kunye neentlobo zezinto eziza kusetyenziswa.
• Iindidi zezinto zeentlobo ezahlukeneyo zingagcinwa ngohlobo olulodwa. Yonke inxibelelwano, ubungakanani bendawo kunye nezinye iiparamitha ziyakwazi ukugcinwa kwindlela eyiyoyilwayo engasetyenziswa kwiiprojekthi ezizayo. Uyilo luyakwazi ukwahlula ukuguqula izinto ezithile zeqela.
• Ilayibrari yamathala ehlanganisiweyo kuwo onke amanqaku kwimodyuli nganye.
• Ukuguqulwa kwelayibrari ngexesha loyilo, ukulondoloza iintlobo ezidalwe.
• Ukuguqulwa kwelayibrari kwifestile yelayibrari ngokungeza, ukuhlela nokususa iintlobo zeelayibrari yehlabathi / yomsebenzisi okanye ilayibrari yeprojekthi.
• Ukukhawuleza okukodwa kunye nokwakheka komyinge wokuyila.
• Uluhlu lwamagumbi olwenziwa ngokuzenzekelayo kwinqanaba ngalinye.
• Uludwe lweefestile kunye neengcango zenziwe ngokuzenzekelayo, kubandakanywa nemiqondiso.
• Iintengiso zingathunyelwa kwifayili ye-RTF kunye nefayile ye-CSV (spreadsheet).
• Ukunxibelelana nezinye iinkqubo.
• Iiprojekthi zingathunyelwa kwifomathi yeXML.
• Ukukwazi ukuhlela nokulungisa iintengiso ngaphambi kokuba zisindiswe. Ukuprinta uluhlu uze ungeze umz.
• Inkqubo entsha yeprojekthi ebizwa ngokuba yiArCADia-Text itholakala. Iqala xa ithunyelwa kwifayili ye-RTF.
• I-ArCADia-Umbhalo ugcina amafomathi alandelayo: i-RTF, i-DOC, i-DOCX, i-TXT ne-PDF.
• Ilayibrari edibeneyo yamacandelo ivumela imidwebo ukuba ichazwe ngeempawu ze-2D zokwakha.
• Ilayibrari yezinto ze-3D ivumela i-interiors eyenziwe ukuba ihlelwe.
• Ikhathalogu yezinto inokwandiswa ngamathala eencwadi amatsha.
• Izinto ezichazwe ngumsebenzisi, ezenziwe ngezinto ze-2D, zingagcinwa kwilayibrari yeprogram.
• Izinto ze-2D kunye ne-3D zingeniswa kwi-angle ukuya kwi-axis e-Z enikezwe ngexesha lokufakwa.
• Ukukwazi ukujikeleza izinto kwi-X kunye nee-Y kunye nokutshintsha isimboli kwimbono xa kuyimfuneko.
IINKCUKACHA (ukuzenzekela ngokuzenzekelayo kwee-collisions kunye neziphambano phakathi kwezinto ze-ArCADia BIM system):
• Ukudibanisa kwanoma iyiphi nayiphi indlela kwi-ArCADia BIM inkqubo ingabhalwa ngokukhululekile.
• Ukuveliswa kwezintlu ezicacileyo zeembambano kwiprojekthi, izibonakaliso zamaphupha kwiplani kunye ne-3D imbono zikhoyo.
Yandisa injini ye-graphic
Isofthiwe iyafumaneka kwiinguqulelo ezimbini, ukuvumela abathengi ukuba bazivumelanise neemfuno zabo kunye nemisebenzi yoyilo lwangoku. I-ArCADiasoft yilungu le-ITC (IntelliCAD Technology Consortium, eU.SA), umnikazi wedwa we-copyright yekhowudi ye-IntelliCAD yomthombo. Ubulungu beArCADiasoft kwi-consortium ye-ITC buqinisekisa ukuba abathengi bethu bahlala bebonelelwa ngeenkqubo zakutsha zeplani kunye nokuhlaziywa okuqhubekayo kwenkqubo. Isofthiwe inomfanekiso omtsha wesicatshulwa, apho zonke iinketho zikho kwiitope eziphezulu kwesikrini.
I-software ye-ArCADia inezo zonke iimpawu ze-software ye-ArCADia LT kwaye iqhutyiswa ngakumbi ngemisebenzi elandelayo:
• imizobo eziphuculweyo 2D (single, emininzi, splines, imizobo kunye nezinye iinketho zokuzoba) kunye nokudalwa ukuguqulwa epheleleyo (kunye neempawu ezilula eliphezulu kakhulu: Beveled, ikhefu, uqhagamshelo, ukuqondana, njalo njalo).
• Ukudala imizobo 3D (imnyama, cone, isigaba, parallelepiped, nesilinda, njl) ngokuzoba kanye ukuguqulwa olupheleleyo lweziqalelo bonke kwakunye ukhetho ukufunda ACIS eziqinileyo.
• Ukuboniswa kweenkcukacha ezifakwe kwiifayile ze-DWG.
• Ulwahlulo olutsha lwemisebenzi yolawulo, olulawulwa ngumphathi wendlela yokulungisa, esiyisixhobo esitsha sokulawula kunye nokucoca. Inketho yokubeka ukukhanya kocwangco kunye nokuqhawula umgca wenziwa kwifestile yendawo yephepha.
• Umsebenzi okhethiweyo wokukhetha ngokukhawuleza.
• Ukunikezela ngokuchanekileyo kwezithombe kunye nokwenza okukhethwa kukho. Le modeli kuphuhliswa software lomhlaba kuza izinto ezahlukeneyo isetyenziswe moya ngamnye, lwahlule phakathi imiphezulu anencasa erhabaxa, iiphaneli esipilini, imiphezulu ezikhanyayo shadings oluchaza ingongoma lokuqaphela, uluhlu izikhundla ukubukela kunye nokukhanya.
• I-software yolwazi olubonakalayo.
• Ukulawula imigca kunye nokuphunyezwa kwazo
• Sebenza kwiingqimba.
• Umqhubi ofana neziko loyilo.
• Iiphaneli zezakhiwo ezixhaswayo.
• Sebenza kwi-Cartesian kunye ne-polar coordinates.
• Ukukhangela kunye neendlela zokubhala.
• Inkxaso, iimpawu, ukugxotha.
• Imisebenzi eqondileyo yokudweba kunye neendawo zokubeka (ESNAP), imodeli yokudweba (i-Ortho), njl.
• Ukukwazi ukungenisa imigca kunye neendlela zokukhangela.
UKUZIPHATHISA UKUBHALWA KWE-SOFTWARE:
• Utoliki ophunyeziweyo wolwimi lwenkqubo yeLISP uvumela ukulayishwa kwezicelo ezenziwe kwezinye iilwimi.
• Ukongeza, iinkqubo zesoftware zingandiswa ngokulayisha i-SDS, i-DRX kunye ne-add-on IRX.
I-ArCADiasoft ilungu le-ITC. Ezinye iikhowudi zomthombo ze-IntelliCAD 8 zisetyenziswe kwinkqubo.
• Ikhompyutha kunye neprojekthi yeklasi yePentium (Intel Core i5 isincomo)
• Imemori ye-2 GB ye-RAM (i-8 GB iphakanyisiwe)
• I-3 GB indawo yokukhupha i-disk yokukhulula
• Ikhadi lemifanekiso exhasa i-DirectX 9,0 (ikhadi le-RAM ye-1GB icebisa)
• OS: Windows 10 okanye Windows 8 okanye Windows 7
[/ ixesha elilandelayo]
[isihloko esilandelayo =] ArCADia 10 PLUS »
INet: € 504,00
Ubungakanani: € 599,76
Yintoni iArCADia PLUS 10?
Isoftware ye-ArCADia 10 Plus inazo zonke iimpawu ze-ArCADia LT kunye nesoftware yeArCADia. Ukongeza, iyaxhaswa kwaye iphuculwe ngale misebenzi ilandelayo:
Inketho yokwenza kunye nokuhlela i-solis ye-ACIS ngokupheleleyo. Iifayile ze-ACIS zisekwe kwifomathi yeemodeli zebhlokhi ephuhliswe yi-Spatial Technology Inc.
Unokwenzeka lokuvumela umsebenzi ngqo kwizinyibilikisi ngokupheleleyo, ukungena, isamba, umahluko, njl.
Ngenisa kunye nokuthumela iifayile kwifomathi ye-SAT.
ULawulo loCWANGCISO LOKUQHUTYWA KOMGAQO-NKQUBO:
• Ukulawulwa kokujonga kunye nolwazi olubonisiweyo lusebenzisa umthi opheleleyo weProjekthi.
• Ukujonga okwenziwe ngokuzenzekelayo kwi-3D kufumaneka kwifestile eyahlukileyo ukuvumela ukubonakaliswa komzimba wonke wesakhiwo okanye, umzekelo, kwinxalenye yenqanaba.
Ukukhethwa kodonga lodidi olucacisiweyo okanye ubumbeko lwalo naluphi na udonga oludityanisiweyo oluchaziweyo.
• Faka iindonga ezingabonakaliyo kumboniso we-3D okanye icandelo lomnqamlezo. Bahlulahlula indawo yegumbi ukuze bahlule into evulekileyo yomsebenzi, umzekelo.
• Intsebenzo yokuhambisa ubushushu ibalwa ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwizinto ezikhethiweyo zezahlulo zesithuba (iindonga, uphahla kunye nophahla).
Ukufakwa kweefestile kunye neengcango ngokusebenzisa iiparamitha zelayibrari yenkqubo kunye nokudalwa kweefestile kunye neengcango ezichazwe ngumsebenzisi.
• Ukuchazwa kokuphuma kweplaza yefestile ngaphakathi nangaphandle kwegumbi, kunye nobukhulu bayo.
• Unokwenzeka lokuqhawula isixhobo sokugcina iifestile.
• Imodyuli isetyenziselwa ukulungisa imizobo kwiinkqubo zophahla lweTeriva. Imizobo ibandakanya zonke izinto eziphambili zenkqubo: imigca yophahla, iibhuleki ezinqamlezileyo, imigangatho efihliweyo, iindawo zokusika, i-KZE kunye ne-KWE, i-KZN kunye ne-KWN izinto zenyibilikisi, iigridi zenkxaso kwaye, ukongeza, luluhlu olufanelekileyo lwezixhobo ezigubungela izinto. edwelisiweyo, eyongezwe yintsimbi eqinisiweyo kunye nekhonkrithi ye-monolithic efunekayo ukwenza uphahla.
Ukubala okuzenzekelayo kunye nencwadi yemisebenzi kuzo zonke uphahla lweTeriva (4.0 / 1; 4.0 / 2; 4.0 / 3; 6,0; 8,0) kwiindawo ezinophahla nangayiphi na indlela.
Ukuhanjiswa ngokuzenzekelayo kweebhulethi, imiqadi enqamlezayo kunye nemisesane yesandatho kwindonga engaphakathi kunye nengaphandle kunye nemithi ephambili.
• Uhlengahlengiso oluzenzekelayo lwenkqubo yokunqunyelwa kwindawo yokuvula nokuvula imiqadi kodonga.
Ukufakwa kweendawo zokuvula i-chimney okanye i-chimney flue (amaqela eeriments ezinenani leekholamu kunye nemigca emiselweyo).
Ukucaciswa kwamanqanaba endiza awodwa kunye nawokubhabha ngokubanzi kunye nezitepsi ezirhabaxa nakweyiphi na isicwangciso.
Iindidi ezintsha zamanqanaba: i-monolithic enemigca okanye iminqamlezo ngombono. Amandla okukhetha uhlobo kunye nezinto zenyathelo.
Ukudalwa okuzenzekelayo kwemodeli yomhlaba wokuseka kwiindawo eziphakamileyo zeemephu zeDWG zedijithali.
Ukufakwa kwezinto ezilingisa izinto zenethiwekhi okanye izinto ezikhoyo emhlabeni ukukhangela ukungqubana koyilo.
Ukwazi ukufaka iigridi zentsimbi zemodyuli, kubandakanya ukhetho lokuhlelwa olupheleleyo.
Ukwenza iibhloko ezichazwa ngumsebenzisi kwibhokisi yencoko yababini okanye kusetyenziswe imizobo yegraphic field yokuhlela.
Ukufakwa kombhalo ozenzekelayo (kuthathwe kuyilo) okanye umsebenzisi-kuchazwe kwibhloko yezihloko.
Ukugcinwa kweebhloko zezihloko kwiprojekthi okanye kwilayibrari yenkqubo.
• Gcina useto oluchazwe ngumsebenzisi lwezinto (ii-bookmark, iifonti, iindidi ezingapheliyo, ukuphakama, njl.njl).
• Umlawuli woLawulo usetyenziselwa ukuphatha iimodeli ezisetyenzisiweyo kuxwebhu olukho kwilayibrari yehlabathi. Ukusukela ngoku ukuya phambili, inokugcinwa kwiitemplate zohlobo lwezinto eziza kusetyenziswa.
Uyilo oluzenzekelayo luluhlu lwegumbi kwinqanaba ngalinye.
• Uyilo oluzenzekelayo lweluhlu lwefestile kunye nomnyango, kubandakanya neesimboli.
Isakhono sokuhlela nokulungisa iintengiso ngaphambi kokuba zigcinwe. Shicilela uluhlu kwaye ungeze, umzekelo, uphawu.
Ithala leencwadi elidityanisiweyo lezinto zivumela imizobo ukuba icaciswe ngeempawu eziyimfuneko zakhiwo ezi-2D.
Izinto ezichazwe ngumsebenzisi ezathi zenziwa ngezinto ezi-2D zinokugcinwa kwilayibrari yenkqubo.
Izinto ezi-2D kunye ne-3D zinokufakwa kwi-engile ukuya kwi-eksisi ezinikezelweyo ngexesha lokufakwa.
Ukuchasana kwayo nayiphi na into kwinkqubo ye-ArCADia BIM kunokubhengezwa ngokukhululekileyo.
• Uluhlu olucacileyo nolunokuqondwa kwezongqubano ezikhoyo kwiprojekthi kunye nezalathi zephuzu ziyafumaneka kwisicwangciso nakwimbono ye-3D.
Isoftware ifumaneka kwiinguqulelo ezimbini, ivumela abathengi ukuba bayilungelelanise ngokweemfuno zabo kunye nemisebenzi yoyilo yangoku. I-ArCADiasoft lilungu le-ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA), umnini welungelo lokushicilela iikhowudi zomthombo ze-IntelliCAD. Ubulungu buka-ArCADiasoft kwi-ITC Consortium buqinisekisa ukuba abathengi bethu bahlala bebonelelwa ngokuphuhliswa kwesoftware kunye nohlaziyo lwenkqubo oluqhubekayo. Isoftware inesicatshulwa esibonakalayo esitsha sokubonisa, apho zonke iindlela zikwikopi ephezulu eqongeni.
Isoftware ye-ArCADia inazo zonke iimpawu zesoftware ye-ArCADia kwaye iphinde yandiswe yile misebenzi ilandelayo:
• Ukuphuculwa kwendalo yomdaniso ophuculweyo we-2D (ilula, i-multiline, iiplanethi, imizobo kunye nezinye iindlela zokuzoba) kunye nokulungiswa okugcweleyo (kunye nemisebenzi elula nangaphezulu: ibhuki, ikhefu, xhuma, umdlalo, njl. Njl.).
Ukudalwa kwemizobo ye-3D (wedge, ikhonji, inqanaba, umaleko, isilinda, njl.njl.) Ngokuzoba nokudibanisa ngokupheleleyo zonke izinto ukongeza kwi-ACIS solids ukufunda.
• Umaleko omtsha wolawulo lwemisebenzi, olawulwa ngumphathi woshicilelo losetyenziso, sisixhobo esitsha sokulawula kunye nokuhlutha kweziqwenga. Iinketho zokuseta ukucaca komaleko kwaye zikhulule zingenziwa kwifestile yendawo yephepha.
• Umsebenzi wokukhetha okhawulezileyo.
• Unikezelo oluyinyani lwefoto kunye nenketho yokubonisa. Imodeli yendawo ephuhlisiweyo yesoftware iboniswa ngezinto ezahlukeneyo ezisetyenziswa kwiindiza ezithile, ukwahlula phakathi kobuso obugudileyo noburhabaxa, iipaneli zesibuko, umphezulu okhanyayo, ukucacisa indawo yokujonga, uluhlu lweendawo zokujonga kunye nokukhanya.
• Cacisa kwaye uyasebenziseka ujongano lwesoftware.
• Ukuxhasa, iimpawu, ukukhuzwa.
[isihloko esilandelayo =] I-ArCADia AC »]
INet: € 177,00
Yintoni iArCADia AC?
I-ArCADia AC yiplagi yokungena kwesoftware ye-AutoCAD eyenza ukungenisa kunye nonxibelelwano lwemisebenzi esisiseko yeenkqubo ze-ArCADia nesoftware ye-AutoCAD.
Unxibelelwano nesoftware ye-AutoCAD
• I-ArCADia AC yinguqu ekhethekileyo yenkqubo ekuvumela ukuba uyifake kunye nesoftware ye-AutoCAD
Ukulawulwa kokujonga kunye nolwazi olubonisiweyo lusebenzisa umthi opheleleyo weProjekthi.
• Ukujonga okwenziwe ngokuzenzekelayo kwi-3D kuyafumaneka kwi-windows eyahlukileyo ukuvumela ukubonakaliswa komzimba wonke wesakhiwo okanye, umzekelo, kwinxalenye yenqanaba.
• Faka iindonga ezingabonakaliyo kumboniso we-3D okanye icandelo lomnqamlezo. Oku kwahlula indawo yegumbi ukwahlula into kwindawo evulekileyo, umzekelo.
Ukufakwa kweefestile neengcango kusetyenziswa iiparamitha zelayibrari yenkqubo kunye nokudalwa kweefestile kunye neminyango echazwe ngumsebenzisi.
• Ubukho bokuchazwa kokuphuma kweesill efesti ngaphakathi nangaphandle kwegumbi, kunye nobukhulu bayo.
• Ubukho bokunqamla kwiifestile.
• Le modyuli isetyenziselwa ukulungisa imizobo kwiinkqubo zophahla lweTeriva. Imizobo ibandakanya zonke izinto eziphambili zenkqubo: imigca yophahla, iibhuleki ezinqamlezileyo, imigca efihliweyo, iindawo zokusika, i-KZE kunye ne-KWE, i-KZN kunye ne-KWN yezinto zelint, inkxaso kwiigridi kwaye, ukongeza, luluhlu olufunekayo lwezixhobo ezigubungela izinto edwelisiweyo, eyongezwe yintsimbi eqinisiweyo kunye nekhonkrithi ye-monolithic efunekayo ukwenza uphahla.
Ukufakwa kwamajoyina okudibanisa, kubandakanya ukuqiniswa okuchaziweyo kwimida yomibini kunye neziqhushumbisi.
Ukufakwa kweendawo zokuvula i-chimney okanye ii-chimney ducts (amaqela e-chimneys enenombolo yeekholamu kunye nemigca emiselweyo).
Iindidi ezintsha zamanqanaba: i-monolithic enamanyathelo okanye ujonga kuyo ngetringer.
• Ubukho bokukhetha uhlobo kunye nezinto zenqanaba.
Ukubanako ukufaka iigrati ze-axis yemodyuli, kubandakanya ukhetho lokuhlelwa olupheleleyo.
• Yenza iibhloko ezichazwa ngumsebenzisi kwibhokisi yencoko yababini okanye usebenzise imizobo yentsingiselo yomfanekiso ocacileyo.
• Gcina iibhloko zeprojekthi okanye kwilayibrari yenkqubo.
• Gcina iisethingi ezichazwe ngumsebenzisi zezixhobo (ii-bookmark, iifonti, iindidi ezingapheliyo, ukuphakama, njl.njl).
• Umphathi wohlobo usetyenziselwa ukulawula iimodeli ezisetyenziswa kuxwebhu olukho kwilayibrari yehlabathi. Ukusukela ngoku ukuya phambili, inokugcinwa kwiitemplate zohlobo lwezinto eziza kusetyenziswa.
Ukuguqulwa kwamathala eencwadi kwifestile yethala leencwadi ngokongeza, ukuhlela nokucima ithala leencwadi lomhlaba / lomsebenzisi okanye iintlobo zeelayibrari zeeprojekthi.
• Ubukho bokuhlela nokulungisa uluhlu ngaphambi kokugcinwa. Shicilela uluhlu kwaye ungeze, umzekelo, uphawu.
Ithala lezinto ze-3D livumela izinto zangaphakathi ukuba zidityaniswe.
Izinto ezichazwe ngumsebenzisi ezenzelwe ukwenza izinto ze-2D zinokugcinwa kwilayibrari yenkqubo.
• Uluhlu olucacileyo nolungenakuthanani lokungqubana kweprojekthi kunye nezalathi zeplani kwisicwangciso kunye nembono ye-3D zikhona.
• Isoftware ye-Autodek AutoCAD 2014/2015/2016/2017
[isihloko esilandelayo =] I-ArCADia ye-10 ″]
INet: € 237,00
Yintoni iArCADia ye-10?
I-ArCADia ye-10 isebenzayo ngokupheleleyo, kulula ukuyisebenzisa kwaye iyinkqubo ye-CAD evumela ukwenziwa kwento eyenzelweyo ukwenza amaxwebhu e-2D kwaye igcine iifayile kwifomathi ye-DWG ukusukela ngo-2013. Yisixhobo esisiseko somzobo kolu shishino. Ulwakhiwo ngendlela ebanzi.
Izixhobo ezisisiseko zeArCADia BIM System:
• Ivumela ukulawulwa kokujonga kunye nolwazi olubonisiweyo kusetyenziswa umthi opheleleyo womphathi weProjekthi ngendlela eqondakalayo.
Izixhobo ezinjengodonga, iifestile, iingcango, njl.njl., Ngoku zifakiwe ngokusetyenziswa komsebenzi wokulandela umkhondo.
• Ikhathalogu yokudityaniswa kwezinto zokwakha ezisekwe kumgangatho wePN-en 6946 kunye nePN-en 12524.
Gcina iibhloko zetayitile kwilayibrari yeprojekthi okanye kwiinkqubo.
I-ArCADia LT ivumela umsebenzisi ukuba abambe kwaye ahlele amaxwebhu e-2D, alayishe imifanekiso ebukekayo (umzekelo iimephu zejometri), achaze imizobo esebenzisa i-TrueType okanye ifonti ye-SHX, faka iibhloksi kwamanye amaxwebhu, kwaye aprinte amaxwebhu ngendlela.
Ujongano olunemifanekiso likuvumela ukuba usebenze ngokudibanisa okanye ukufaka idatha usebenzisa ubude kunye nee-angles. Ibha yokuyalela intshintsho kumanqanaba ohlukeneyo enkqubo yokuzoba kunye noshintsho; ukongeza ekunikezeleni iinketho ezincedisayo ezizezona ziluncedo kakhulu ngelo xesha. Ukukhetha imisebenzi okubaluleke kakhulu kumzobo kuvumele ukuba ukhetho luzalisekiswe ngendlela enocwangco kwaye elula. Zonke izixhobo ezibaluleke kakhulu ukwenza iGridi ivulwe kwaye ivaliwe, u-Ortho, i-snaps snap, umphathi weprojekthi, kunye ne-3D View Window, ii-Interface theme Modified) zibekwe ezantsi kwesikrini, zenza i Unxibelelwano kunye nenkqubo kunye nomsebenzi ngokwayo kulula kwaye ngokukhawuleza.
• Nawuphi na umdibaniso unokutsalwa usebenzisa imigca, iipolylines, isangqa, iiarcs, ii-ellipses, iipoligoni eziqhelekileyo kunye noxande.
• Hlela umzobo usebenzisa ezi zixhobo zilandelayo: hambisa, kopisha, chaza, ujikeleze, isipili, iqela, isivuno, ukuqhuma kunye nokuhlawula. Umsebenzisi ukhetha into eza kutshintshwa aze abonise umsebenzi ekufuneka wenziwe.
Ukuvalwa okuphakathi: Iisangqa, iipuzzle, kunye namaxande zinokuqhawulwa ngokukhululekileyo kusetyenziswa iphethini eboniswe kwi-Element Properties iwindow.
Yakha kwaye ugcine iibhlokhi: kumaqela ezinto ezenza uphawu oluthile. Ibhlokhi igcinwa kuxwebhu olutsha kwaye ingafakwa kuyo yomzobo eyenziweyo kuwo nawuphi na umdwebo. Ngalo lonke ixesha kufakwe ibhloko, inkqubo ibuza malunga nokunyuka kwayo kunye nokujikeleza.
Inkcazo yemizobo yenziwa kusetyenziswa isicatshulwa se-multiline ngefon ye-SHX kunye ne-TrueType. Isicatshulwa sifakwe kwiwindows eyongezelelweyo eboniswayo emva kokwenza ukhetho. Ubungakanani bayo, uhlobo lwefonti, ukuzithethelela kunye nezinye izinto ezifanayo zichazwe kwi-multiline text window.
• Kuyenzeka ukufaka i-bitmap masaaps kwifomathi eyaziwayo njenge-JPG, BMP, TIF kunye ne-PNG. Ezi zixhobo zilandelayo ziyafumaneka apha: ukukala, ukuvunxa, ukutshintsha ukukhanya, umahluko, kunye nokuphelelwa.
Iphepha lokushicilela libekwe ngokuzenzekelayo kwindawo yokuzoba. Ngokucacileyo nangokulula, ubonakalisa ukuba le mifanekiso iza kujongeka njani.
• ubungakanani bephepha lokushicilela kunye nenqanaba linokuchazwa ngokuchanekileyo.
Iinketho zenkqubo ziyandiswa yimisebenzi esisiseko yenkqubo ye-ArCADia BIM, okanye izinto ezifanelekileyo ezenza iimodeli zokwakha ezakhiwe ngokusekelwe kukhetho lweemodyuli ezichongiweyo zecandelo elithile.
U-ArCADiasoft ulilungu le-ITC. Ezinye iikhowudi zomthombo ze-IntelliCAD 8 zisetyenzisiwe kwinkqubo.
[isihloko esilandelayo] = ArCADia Architecture 8 ″]
I-ArCADia BIM-Iimodyuli zoLwakhiwo
INet: € 599,00
Yintoni iArCADia-ARCHITECTURE 8?
I-ArCADia-ARCHITECTURE yimodyuli ethile yenkqubo yeArCADia BIM, esekwe kumbono wolwazi lweModeli yoKwakha iModeli (BIM). Inkqubo inokusetyenziselwa ukwenza amaxwebhu obugcisa bokwakha. Ngaphezulu kwayo konke, yenzelwe abakhi bezakhiwo kunye nabo bonke abo bayila kunye nokubuyisela iifom zokwakha.
I-ArCADia-ARCHITECTURE isetyenziselwa ukudalwa okujolise kwinto yezicwangciso zomsebenzi wobuchule kunye namacandelo, ukujonga kwangaphambili kwe-3D esebenzisana, kunye nembonakalo eyiyo. Le nkqubo ibandakanya imisebenzi ekhethekileyo yobumbeko efana: namacandelo okuzenzekelayo, imilo ezizenzekelayo, okanye ukungenisa imilo yezinto kwezinye iinkqubo.
• Ukufakwa kweearches, iindonga ezizodwa kunye nezineendidi ezininzi.
• Ubukho bokuguqula umzobo we-2D owenziwe kwiipylylines okanye imigca kwiplati yodonga lwendawo enye nangaphezulu, udonga oluqinisekileyo okanye isicwangciso sesiseko.
I-WINDOWS kunye ne-Doors ezakhiwe yi-SCRIPT:
Ukufakwa kweefestile zeemilo ezahlukeneyo (ezijikelezayo, ezingunxantathu, kunye ne-arch, njl. Njl.), Kubandakanya nokuseka ulwahlulo oluvulekileyo kunye noluthe nkqo kunye nokuchaza ukubonakala kweefestile okanye ukuzisika ukuzivula (ngaphandle kwewindow). ngendlela yeefestile ezikhethekileyo (iingcango).
• Ukufakwa kweminyango enye kunye neyimbini ephindwe kabini, kubandakanya icala elongeziweyo okanye izibane eziphezulu.
Iifestile ezintsha zongezwa kwilayibrari ebhaliweyo; Inxalenye enye, ezimbini-inxenye kunye nenxalenye ezintathu ezinokubakho ngokungena kwi-mullions okanye ukuvulwa kwefestile.
Ezi zinto zilandelayo zongezwa, phakathi kwezinye izinto, kwilayibrari yeminyango: ukujikeleza, ukuntywila, ukushukuma, iingcango zokuphuma.
Ukufakwa kwendawo yokuvula enobubanzi nobubanzi obuhleliweyo eludongeni kwicala lasekhohlo nangasekunene (okufakwa kulo naluphi na ubude).
• Ubukho bokufaka umngxunya wobunzulu obumiselwe kwangaphambili.
Ukufakwa kwawo nawuphi na umgangatho obonisa ubume bawo.
Ukufakwa komgangatho kumagumbi akumgangatho osezantsi.
Ukwaziswa kwemingxunya kwisilingi ngokwayo okanye ngesandla.
Ukufakwa kweekholam zensimbi ethe nkqo kunye notyekelo.
Ukufakwa kwento yentsimbi ethe tye.
• Ukufaka isakhelo somda kwifayile ye-.f3, esijongeka ngathi siyinto ethile kodwa sinokusetyenziswa kwaye sijongwa njengento enye yebhari (ukuhambisa nokuhlela ngokwahlukeneyo).
Ukufakelwa kwezinto ezibaninzi ngebhanti ngesixa esichaziweyo, isithuba kunye nokufakwa.
• Ukudalwa kwesitepsi esijikeleze ngaphakathi esifakwe okanye ngentsika.
Ukufakwa kweendlela ezizimeleyo kunye neendlela ezihamba kunye nokuphumla.
• Ukufakwa ngokuzenzekelayo kunye nophahla olukhululekileyo lophahla olumisiweyo, kubandakanya uluhlu olupheleleyo lweendlela zokhetho (ukutshintsha ukuba yophahla olunye okanye uphahla olumbindi-mbini, ukutshintsha ukuphakama kodonga olufutshane kunye nolwakhiwo lwalo naluphi na ithambeka ngokwahlukeneyo).
• Ukufakwa kweefestile kunye nokuvuleka eluphahleni.
• Ukufakwa kwesiciko nge-skylight (Attic).
• Ukufakwa kwesakhiwo sokhuni ukusuka kwinkqubo ye-R3D3-Isakhelo se-3D (amathambeka ophahla athunyelwa ku-R3D3-Isakhelo se-3D sibalwa ngendlela eyakhiweyo, ngelixa uphahla lubuyiselwe e-ArCADia-ARCHITECTURE).
• Ukufakwa kweefestile eluphahleni.
Ukufakwa ngokuzenzekelayo okanye ukufakwa kwencwadana yeengcango zophahla.
Ukufakwa kwemibhobho yokuhambisa amanzi elifumana ngokuzenzekelayo ithumbu kunye nenqanaba lomhlaba.
• Ukufakwa ngokuzenzekelayo okanye ukufakwa kweenqwelomoya kweethayile ezishukumisayo.
• Ukufaka i-chimneys, ii-hoods ze-ventilation kunye nee-hood fume.
• Ukufakwa koonogada bekhephu: ucingo lokubiyelwa likhephu, iikhuseli zeqhwa kunye neeplagi.
• Ukuba nako kokuchaza uhlobo lophahla ngaphambi kokulufaka.
• Iinketho zokukhangela sele zifumaneka xa kufakwa eluphahleni.
• Ubukho bokufaka ingqokelela yelanga eluphahleni.
Ukufakwa komda weenyawo okanye naluphi na unyawo oluchazwe kwisicwangciso.
• Zoba nayiphi na imilo yesiseko esomeleleyo kunye nobude obumiselweyo. Esiqinileyo singasetyenziswa ngakumbi njengethala, iqonga, i-mezzanine, kunye nokunye.
Ukufakwa kwesiseko sobubanzi obuchaziweyo kunye nokuphakama, umzekelo, njengamajoyina kunye neebhulethi ezidibeneyo, kubandakanya nokukwazi ukukhetha i-axis okanye umphetho.
• Izinyibilikisi zifakwe kwisiseko soxande.
Ukuhlelwa kwesolides ezahlulahlula kunye nokudala nawuphi na umngxunya ...
• Ukufakwa kwezinto kwezi fomathi zilandelayo: I-3DS, i-ACO kunye ne-O2C.
Iimpawu ezichaziweyo zomsebenzisi (izinto ezi-2D) zinokugcinwa kwilayibrari yenkqubo.
Ukudala iphakheji yeprojekthi, ekunokwenzeka ukuba ishukumise iprojekthi ngezinto ezingeniswe kwikhompyuter apho ilayibrari yento esemgangathweni ingenazo ezi zinto.
• Ukuba nako kokugcina into yayo nayiphi na into yenkqubo yeArCADia kwithala leencwadi, umzekelo, into eyilwe kwiimpawu zezithuba.
Ukudalwa okuzenzekelayo kwecandelo lomnqamlezo elibonisa umgca osikiweyo wesakhiwo, kubandakanya nokuchazwa kwezinto ezibonakalayo kwicandelo lomnqamlezo.
Ukufakwa kwecandelo lomnqamlezo elimileyo nangaliphi na inani leefolokhwe.
• Ukufakwa ngokuzenzekelayo kweebhanti zemikhonkwane, zibeke phezu kwemithwalo enodonga (eneendidi zeendonga zodonga) kumgangatho ovaliweyo.
• Iileyibhile ezibonakalayo kwicandelo lomnqamlezo zifakwe ngokuzenzekelayo ngefestile kunye nendibano yomnyango.
• Icandelo lomnqamlezo linokuvuseleleka ngokuzenzekelayo kwaye ngesandla ukuze likhawulezise umsebenzi woyilo.
• Iimbono zinokusetyenziswa, gcina amaqela ezinto kunye nenkxaso kumphathi weprojekthi.
Isakhono sokubonisa icandelo lezinto ezinqamlezayo ze-3D. Inketho ikhutshwe ngokungagqibekanga, inokutshintshwa kwiwindows yomlawuli weprojekthi emva kokuvula ii-bulbs.
Izixhobo zento nganye zichazwe ngeempawu zazo.
• Unikezo olulula (olukhawulezayo nolula ukulusebenzisa) okanye olwenziweyo, kubandakanya ukubakho kokuchaza lonke uhlengahlengiso olufanelekileyo (uhlobo lwesibane kunye nesikhundla, ukuthambisa amathunzi, njl njl)
Indlela entsha yokuhanjiswa kwangaphandle kunye neemephu zangaphakathi zefoto.
• Ukuhanjiswa okubini kunokubalwa ngokwembono ezahlukeneyo: ukukhanya kwemini kunye nokujonga ebusuku.
• Iwindi yokubonelela izimeleyo yenkqubo ye-ArCADia-ARCHITECTURE, ekuvumela ukuba uqhubeke ukusebenza uyilo, kuba ukubonwa kuyabalwa.
• Amanqanaba amaninzi, okurekhoda imbonakalo kwiikhamera ezichazwe kwangaphambili.
Isaziso ngombono wesakhiwo esinomfanekiso njengomboniso owodwa okanye weekhamera ezikhethiweyo njengoko zichaziwe kwinkqubo.
Ukubanakho ukucima izixhobo emva kobhaliso oluninzi lokumelwa kweekhamera eziswe kuyilo.
• Uhlalutyo losuku kunye nomhla kunye nexesha, kunye nokunika imeko ngeentsuku esinomdla kuzo.
• Ubungakanani obucwangcisiweyo beplani yonke yomgangatho yenziwa ngokukhetha imigca yokulinganisa (iyonke ingaphandle, yangaphandle yezinto ezinokuhombisa, amagumbi kunye nodonga, iifestile kunye nezakhelo, kunye nokuvula).
• Ukulungisa kubelwe izinto, kuvumela ukuguqulwa okuzenzekelayo kwazo zonke iinguqulelo ezenziweyo.
• Ukutsalwa kweendonga kunye nokujikeleza kweendonga kunokwenziwa.
• Ukutswina kubonisa ubude beedonga ezi-arc.
• Ubukho bokufaka ukuphakama kwenqaku kwisicwangciso somgangatho kunye necandelo lomnqamlezo.
• Ubukho bokufaka inkcazo yento leyo (isileyi, umgangatho, udonga) zombini kwisicwangciso nakwicandelo lomnqamlezo (ngaphandle kokuhlangana, iflegi yokumakisha enoluhlu lwezinto ikwakhona kwinto ebonisiweyo).
• Gqibezela uhlengahlengiso lwezinto ezinoluhlu, ukongeza kunye nokukhupha izinto kunye notshintsho kwizixhobo esele zikho.
Inkcazo ezenzekelayo yesakhiwo sendlu yophahla, ukubalwa kwenani libonisa ubungakanani kunye nobude obuguqukayo bezinto.
Ukudalwa okuzenzekelayo koludwe lweenkuni ukulungiselela ulwakhiwo lwezixhobo ezifakwe kwinkqubo ye-R3D3-Rama 3D.
Indawo yophicotho kunye nobungakanani beeruby. Iiprojekthi zeakhawunti ezintsha ezongeza ngokuzenzekelayo iindawo eziphelele, umnatha kunye nendawo yomhlaba opheleleyo kunye neendawo zokwakha, ukongeza umthamo we-cubic. Iiakhawunti zikwabandakanya eyona ndawo incinci yesiza kunye nedatha yophahla: ithambeka kunye nobude bokuphithizela.
Iakhawunti entsha yophahla, ekuya kuthi ubude bee-eye, iikona, uxinzelelo lophahla, lwemiphetho kunye neencam zephahla ziya kubandakanywa, ngaphandle kwentlawulo eyenzelwe uphahla kunye nokubala amaphahla ophahla.
Uluhlu oluzenzekelayo lwezinto ezinophahla kubandakanya isisu, isisu kunye nobude bethayile, inani leepayipi kunye neeplagi zetayile kunye nezihlanganisi, kunye nenani leekhowudi kunye nabalindi bekhephu. Kukho amathuba okuba ukhethe ukuba zeziphi izinto eziza kufakwa kwiakhawunti.
• Unokwenza iarhente yezinto zephahla.
Uluhlu lwezinto ezisetyenzisiweyo kwizinto ezisetyenzisiweyo ukuza kuthi ga ngoku zinokuveliswa. Kubalwa inani leenxalenye zamaqhezu enziwe, umzekelo, izitena, ngokokukhetha ukupakisha (iipakethi, iipakeji, iiroli), ithuba lokukhetha izinto eziza kufakelwa kuzo uluhlu. Kuyenzeka ukuba kuthunyelwe itafile enye kuluhlu okanye eziliqela ngexesha elinye kwifayile enye.
Uluhlu lwezinto ezifakelweyo zebar zinokuveliswa, zombini ezichazwe kuyilo kunye nezo zingeniswe kwinkqubo ye-3D R3D3-Rama.
ISIQINISEKISO NOKUQHUTYELWA KWEENCWADANA:
• Ukuba nakho ukwazisa umgangatho womhlaba kunye nesimboli esentla emantla kwicandelo lomnqamlezo.
• Inguqulelo entsha yenza ikhampasi okanye ikhampasi yanyuka ixhomekeke kuhlalutyo lwemini, ke kufuneka ilungelelanise indawo yoyilo okanye ukuba isixeko sikhonjisiwe kuluhlu, ngenxa yokuhanjiswa kubalwa kuluhlu iziseko kunye neeyure ezibonisiweyo.
Unxibelelwano nezinye iinkqubo:
• Ukutshintshwa kwedatha ejolise kwinto kunye nehlelo leArcon (ukuhambisa ngokubhaliweyo kwezinto ze-3D ezibhaliweyo kwilayibrari yenkqubo).
Ukukhuphela ngaphandle kwitrafti yoyilo ukuya kwi-R3D3-Rama 3D, kunokwenzeka ukuba ugqithise lonke uphahla loyilo kwangaxeshanye kunye nazo zonke ii-axular zeMo United kwigridi enye.
• Ukungeniswa kwesakhelo se-R3D3-Rama 3D kwifayile ye-F3D.
Ukuze ukwazi ukusebenza kuzo zonke iimodyuli zemodyuli ezithile ziya kufuneka ilayisensi:
• I-ArCADia ye-LT okanye i-ArCADia ye-10 okanye i-ArCADia PLUS 10 okanye i-AutoCAD ® iinguqulelo zesoftware ka-2014/2015/2016/2017 kwi-Autodesk.
• Ukuba imodyuli ethile yecandelo ifakiwe njengembambano yesoftware yeAutoCAD, imodyuli ye-ArCADia AC iyafuneka.
[isihloko esilandelayo =] Imodyuli zombane zeArCADia »]
I-ArCADia BIM-Iimodyuli zombane
UKUFAKWA KOKUGQIBELA KWE-ArCADia 2
INet: € 356,00
Yintoni i-ArCADia-UNYULO EFANELEKILEYO?
I-ArCADia-E-FONI YOKUFAKWA KWESISEKO yimodyuli ethile yenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumbono wolwazi lweModeli yokwakha (i-BIM). Inkqubo inokusetyenziselwa ukwenza amaxwebhu anobungcali kwiinkqubo zombane ezisezantsi zombane. Le nkqubo yenzelwe abaqulunqi beenkqubo zombane kunye nezixhobo zombane.
Inkqubo ye-ArCADia-EYONYULO YOKUFUNDA inika amandla ngokukhawuleza kunye nokulungiswa kwezicwangciso zeenkqubo zombane kunye nezibane, kunye nokusebenza kokuqinisekisa nokubala okuyimfuneko kuyilo.
• ENTSHA: ukubakho kokuvelisa imizobo elungelelanisiweyo yemigca yombane yoyilo lwenkqubo yombane. Umzobo obonakalayo wemigca yombane yangaphakathi phakathi kokutshintsha okuguqulweyo okwenziwe lula unakho ukuveliswa ngokukhawuleza.
• ENTSHA: Ungayibeka imbonakalo yento ethile. Iimpawu ezichaziweyo zomsebenzisi zezinto eziyilelwayo zinokwenziwa ngokukhululekileyo.
• Imizobo yeenkqubo zangaphakathi zombane zinokuveliswa ngokukhawuleza kwizicwangciso zezakhiwo, kwindawo apho iipaneli zisasazwa khona, zinikezela iiparameter ezifanelekileyo zobugcisa, ukulungisa iziseko, izibane kunye neeplagi zekhebula ukuze kudityaniswe imvelaphi. isibonelelo sombane kunye nezinto zekhaya kusetyenziswa intambo kunye nabaqhubi.
Nje ukuba inkqubo yombane yenziwe, inkqubo inokusetyenziselwa ukubala kwangoku isiphaluka esifutshane esinokwenzeka kunye nomthamo waso, imijikelezo yomthwalo (1-fo 3-f) kunye nevolumu yehla kumacandelo yenkqubo yombane eyilelweyo.
Inkqubo inokusetyenziselwa ukwenza ukulingana kwamandla ngoxwebhu lwengcali echaza izixhobo nezixhobo ezifakelweyo.
Inkqubo inokusetyenziselwa ukwenza uluhlu lwezinto ezisetyenzisiweyo kuyilo.
ISICWANGCISO SOKUGQIBELA SOKUFAKWA KWE-ArCADia
INet: € 157,00
Yintoni i-ArCADia-EYONYULO YOKUFAKWA KOKUFUNDA?
I-ArCADia-EYONYULO YOKUFAKWA KWESICWANGCISO ESINOKUKHUSELEKA yimodyuli yenkqubo ye-ArCADia-EYONYULO YOKUGQIBELA.
Inkqubo yenzelwe uyilo lwe ducts zekhebula, izitepsi kunye neziteshi zentambo. Ikwaqhuba unxibelelwano nenkqubo ye-DIALux, esetyenziswa kuyilo lwee-luminaires.
• Uyilo lweendlela zekhebula.
• Ukutshintshwa kolwazi kwizombinaires kunye neNkqubo ye-DIALux.
• Ukubala kunye neepesenti ukubalwa kwecandelo lomnqamlezo lizalisiweyo lendlela.
I-NTSWORKS ye-ArCADia-AMANDLA 2
INet: € 296,00
Yintoni iArCADia-AMANDLA AMAHLA AMAHLA?
I-ArCADia-AMANDLA NETWORKS yimodyuli ethile yenkqubo yeArCADia BIM, esekwe kumbono wolwazi lweModeli yoKwakha (BIM).
I-ArCADia-AMANDLA NETWORKS ivumela ukwenziwa kwamaxwebhu obuchwephesha ahambelana noyilo lwenethiwekhi yombane yangaphandle esezantsi. Le nkqubo inceda ekudalweni okujolise kwinto yemizobo yeigridi zamandla zangaphandle kwizicwangciso zophuhliso lomhlaba okanye ulungiselelo lwemizobo yomsebenzisi ebonisa igridi yombane ukusuka kumguqululi wevolthi ephantsi ukuya kwipaneli yokusasaza isakhiwo.
• ENTSHA: ukuvelisa imizobo yolwakhiwo lwenethiwekhi ukusuka kumthombo wamandla ukuya kwinto yokugqibela. Umsebenzi ungasetyenziselwa ukuvelisa ngokukhawuleza umzobo wobume bomzobo womnatha ocetywayo, oyimfuneko kumaxwebhu oyilo. Umzobo uqukethe i-topology yenethiwekhi ecetywayo.
• ENTSHA: Ukuphuculwa kobalo lobuchwephesha ngokuthi kwandiswe umsebenzi kunye nezinto ezithintelayo kwisangqa esisekufutshane kwisakhelo "sokuxhuma ikhebula", sivumele ukubalwa kwenzelwe umjikelo omfutshane womgca wamandla wangaphakathi ukusuka kwisikhangeli ngentambo kwiphaneli yokuhambisa esakhiweni kunye nokubalwa komthamo wecandelo ngalinye lenethiwekhi eyilelweyo.
• ENTSHA: indlela enokubakho yokudala isaveyi yophando ukuze kulungelelaniswe kwizicwangciso zophuhliso lomhlaba. Nje ukuba amanqaku omvavanyi aphawulwe, umsebenzisi unokuvelisa ingxelo kwi-X kunye ne-Y kulungelelanisa kwifayile ye-RTF. Ukusebenza kuza kakuhle xa uyilo kufuneka lungenise ulungelelwaniso lophononongo lweengcombolo zetayile yocwangciso kwiqela lokuvunywa kwamaxwebhu koyilo.
• ENTSHA: ibhokisi eqhelekileyo ye-wiring
• ENTSHA: Ukwazi ukutshintsha imbonakalo yento ethile kunye nokwenza iisimboli zomsebenzisi wezinto ezenziweyo.
Inkqubo ivumela ukudalwa okungathathelwa ingqalelo kwemizobo yeigridi zamandla zangaphandle kwizicwangciso zophuhliso lomhlaba, kunye nokulungiswa kwemizobo yomsebenzisi ebonisa inethiwekhi yamandla ukusuka kumguquli wevolthi ephantsi ukuya kwipaneli yokuhambisa isakhiwo.
• Uyilo lwentambo kunye noyilo lwenethiwekhi yamandla ombane.
• Ukulungiselela ngokukhawuleza nangokufanelekileyo uyilo lonxibelelwano lombane kumaziko okwakha kunye noyilo lwenkqubo yokukhanya kwangaphandle, umzekelo: isitrato, indlela, ukukhanya kwendawo yokupaka, njl.
Ngentambo nganye yombane enqwenelekayo, umsebenzisi unokukhetha izixhobo zokhuselo ngokuchasene nemijikelezo emifutshane enokuthwala kusetyenziswa ithala leencwadi elikhuselayo okanye azenzele izinto zakhe.
• Ubukho bethala leencwadi elityebileyo lezinto kunye nokuba kunokwenzeka ukuba umsebenzisi azenzele awabo amanqaku.
Ukuqhutywa kwazo zonke izibalo ezisisiseko zenethiwekhi.
Ukudala amaxwebhu obuchwephesha obuchwephesha nengxelo yezinto ezisetyenzisiweyo kuyilo lwenguqu yakhe elandelayo.
• Ukuba imodyuli ethile yecandelo ifakiwe njengembambano yesoftware yeAutoCAD, imodyuli ye-ArCADia AC iyadingeka
IIBHODI ZE-ArCADia-DISTRIBUTION 2
INet: € 339,00
Yintoni i-ArCADia-DISTRIBUTION BARDARD?
I-ArCADia-DISTRIBUTION IBHODI yimodyuli ekhethekileyo yecandelo lenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumgaqo wolwazi wokwakha (BIM). Le nkqubo inceda kuphuhliso lwamaxwebhu obuchwephesha obuchwephesha obufunekayo ukuvelisa imizobo yesekethe enye. Le nkqubo yenzelwe bobabini abayili benethiwekhi, umbane neesistim zamandla, kunye nabo bonke abantu abasebenza kwishishini lobunjineli zombane.
Inkqubo ye-ArCADia-DISTRIBUTION BOARDS ingasetyenziselwa ukwenza umzobo wesixhobo sokuhambisa esakhiweyo okanye nawuphi na umzobo wesekethe kunye nokwenza izibalo ezisisiseko zobalo. Ithala lencwadi yombane yesixhobo linokusetyenziswa ukuyila inkqubo yombane. Iimpawu zinokuhlelwa kwaye zinikezwe iiparamitha zobugcisa. Ngaphandle kwendlela yokuvelisa umzobo wesitshintshi ngendlela efanelekileyo, inkqubo inokusetyenziselwa ukwenza ngokuzenzekelayo umzobo webhodi yokutshintshela eyilelwe i-ArCADia-E-MNYANGO YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA. Umdibaniso we-algorithms ezenzekelayo ukwenza imizobo yesekethe esetyenzisiweyo kwisicelo kunye neenkcukacha zesimboli zezixhobo zombane kunye nokusebenza ngokubala okusisiseko kuqinisekisa isixhobo esifanelekileyo sokuzoba imizobo yesekethe.
Iimpawu ezisisiseko kunye nemisebenzi yale nkqubo ibandakanya:
• Uyilo olukhawulezileyo nolusebenzayo lweemizobo zomgca-nye wokutshintsha.
• Amandla okwenza iinkqubo zokulawula.
• Ukusebenza kobalo olusisiseko lobuchule (umthwalo okwangoku, ukwehla kwevolthi).
• Isizukulwana esizenzekelayo somzobo wepaneli yokuhanjiswa eyilelwe ukufakwa kombane weArCADia.
• Iziko ledatha lezixhobo zombane kunye nezixhobo.
• Ukudweliswa koluhlu lwamanani ezixhobo ezisetyenzisiweyo kuyilo.
• Ukuveliswa okuzenzekelayo kweembono zokwenyani kweebhodi zokuhanjiswa.
• Ukuba nako ukudala umbono wokwenene webhodi yokuhambisa kunye nokubeka izixhobo zombane kuyo.
Ukudala ukuvezwa kweetafile zokuhanjiswa ezenziwe kumbono we-3D.
• Iziko ledatha elitsha leempawu zombane:
o Ukutshintsha kweCam
o Iifandesi ezihamba rhoqo
o Iikhoyili zoxinzelelo
Ilayibrari eyandisiweyo yezixhobo zombane:
okanye uJean Muller
[isihloko esilandelayo =] iimodyuli zegesi ze-ArCADia zegesi]
I-ArCADia BIM-Iimodyuli zokubonelela ngegesi
UKUFAKWA KWE-ArCADia-GAS 2
INet: € 520,00
Yintoni i-ArCADia-GAS INSTALLATIONS?
I-ArCADia-GAS INSTALLATIONS yimodyuli emiselweyo yenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumbono wolwazi wokwakha (BIM). Inkqubo ingasetyenziselwa ukwenza amaxwebhu oyilo lwenkqubo yangaphakathi yegesi.
Inkqubo ivumela ukudalwa okujolise kwinto yemizobo yangaphakathi yegesi kwiseyile yoyilo lwesakhiwo kunye nokuveliswa kwemizobo yokubala kunye nokwandiswa ngokuzenzekelayo kwenkqubo. Ithala lezinto linokusetyenziselwa ukuyila inkqubo yegesi. Izinto zinokuhlelwa kwaye zinikezwe iiparamitha zobugcisa.
Imodyuli ye-ArCADia-GAS INSTALLATIONS yenza ubalo oluyimfuneko ukuqinisekisa uyilo oluchanekileyo lwenkqubo (ukuqinisekiswa kweedayimitha ezichanekileyo zodidi loxinzelelo lwezinto zerhasi) kunye nokudalwa kwengxelo yobuchule bobuchwephesha.
Le nkqubo yenzelwe zombini inethiwekhi yegesi kunye nabaqulunqi benkqubo kunye nabo bonke abantu abanxulunyaniswa namacandelo okubumba kunye nofakelo kumatshini wobunjineli. UKUFAKWA kwe-ArCADia-GAS yinxalenye yenkqubo ye-ArCADia BIM enentsebenziswano yeemodyuli ezahlukeneyo zolu shishino.
Ukulungiswa kwezicwangciso zokufakwa kwegesi kwizicwangciso zezakhiwo, ukusuka kwindawo yebhokisi yegesi, ukwabela iiparamitha zobugcisa, kubandakanya iiparitha zerhasi, umbutho wezixhobo zegesi, izixhobo zomlinganiso ngokukhankanya indlela yendlela Inkqubo yegesi, ukuya kwindawo yoqhagamshelo lwegesi evaliweyo.
• ENTSHA: ikhiti yokufaka ngesixhobo sokucoca igesi kunye nommiselo woxinzelelo.
• ENTSHA: ukukwazi ukutshintsha umgca we-CAD oqhelekileyo kwisakhiwo sombhobho wegesi kwimodyuli yeArCADia - GAS INSTALLATIONS.
Ukuqulunqwa kwemfuno yerhasi yoyilo yesakhiwo esinikezelwe ngerhasi yayo nayiphi na impahla yokuhlangana, kubandakanya neenkonzo.
Ukusebenza kwezibalo zokuphulukana noxinzelelo olupheleleyo kuzo zonke iindlela eziya kwizixhobo zombane kunye nokugqitywa koxinzelelo oluphezulu kunye nolona luphezulu lwesixhobo segesi.
• Imiyalezo kunye nezilumkiso eziqinisekisa ukubalwa okuchanekileyo kunye neenkqubo zerhasi eyilelweyo.
Ukuphunyezwa kwemizobo yokubala yazo zonke iindlela zokuhambisa iirhasi kunye nezinto zombane, kubandakanya ukuba nako kuyenza icace ngakumbi.
• ENTSHA: ukudalwa okuzenzekelayo komzobo ophuhlisayo wokofakelwa irhasi yonke okanye nayiphi na ingxenye yayo. Ukudalwa okuzenzekelayo komzobo we-axonometric wayo yonke ufakelo lwegesi oluqikelelweyo okanye nayiphi na ingxenye yalo. Ubukho bokufakelwa kwezixhobo ngqo kumzobo we-axonometric ngokufakwa ngokuzenzekelayo kwimbono kunye nembono ngokubanzi.
Ukudalwa okuzenzekelayo kwezicwangciso zokwandiswa kwenkqubo yegesi eyilelweyo.
• ENTSHA: Isizukulwane esizenzekelayo seeseti zezinto zonxibelelwano kuxhomekeka kuhlobo loqhagamshelo kwindawo yokudibana kunye neendlela zokungena, kubandakanya ukubakho kokuziguqula.
Ukudaleka kwengxelo yokubala ene-arhente yelahleko yerhasi kumacandelo oyilo, kubandakanya nokutshintsha kwemizobo yecandelo ngqo kwitheyibhuli yokubala kunye nokulungiswa okuzenzekelayo kweedayimitha kumzobo.
• Ukuvelisa uluhlu lwezinto ezenziwe zaza zalungiswa.
Isakhono sokongeza ngokukhawuleza kwaye ngokulula isiseko sedatha kwilayibrari yenkqubo ephambili kwaye ukhethe iifolda eziza kusetyenziswa kuyilo lwenkqubo ethile.
Ukujonga kwangaphambili kwe-3D yenkqubo yegesi eyenza ukulungiswa kwendlela yombhobho ongabonakaliyo kwisicwangciso.
Ukukhuphela iibhili zezinto, uluhlu lwezinto, kunye neengxelo kwifomathi yeRTF (umzekelo, kwiMicrosoft Word).
• ENTSHA: ukuthumela kwelinye ilizwe izinto ezisetyenziswayo kwifomathi ye-CSV (umzekelo, kwiMicrosoft Excel) nakwinkqubo yeCeninwest.
UKUFAKWA KWE-GESA YAMALUNGU e-ArCADia-exterNAL GAS
INet: € 486,00
Yintoni i-ArCADia-ExterNAL GAS INSTALLATIONS?
I-ArCADia-ExterNAL GAS INSTALLATIONS yimodyuli ethile yenkqubo yeArCADia BIM, esekwe kumbono weemodeli zolwazi lokwakha (BIM). Inkqubo ingasetyenziselwa ukuvelisa amaxwebhu obuchwephesha bokuyilwa konxibelelwano lwegesi, kubandakanya nenkqubo yerhasi yangaphandle.
Le nkqubo yenzelwe zombini uthungelwano lwegesi kunye nabaqulunqi benkqubo kunye nabo bonke abantu abadityaniswa ngamacandelo okubeka amanzi kunye nobunjineli bobugcisa. Ingasetyenziselwa ukudalwa okujolise kwinto kwimizobo yokuqhagamshelwa kwerhasi kunye nezinto zangaphandle zenkqubo yerhasi (ebekwe ngaphandle kwesakhiwo okanye iqela lezakhiwo). Uyilo lunokwenziwa kwizicwangciso zophuhliso lomhlaba ngendlela yeemephu ezisisiseko ze-cadastral okanye imizobo yomsebenzisi eyimele inethiwekhi esele ikho okanye ecetywayo.
Inkqubo ye-ArCADia-ExterNAL GAS INSTALLATIONS inika ithuba lokudala ngokuzenzekelayo kwimizobo yoyilo kunye neeprofayile zobude beendlela zendlela, kubandakanya nezinto zenkqubo. Inkqubo ibala idatha eyimfuneko yoyilo oluchanekileyo lwenkqubo ethathela ingqalelo ukuqinisekiswa kweedayimitha zombhobho ezichanekileyo kunye nokuzimisela koxinzelelo lwehla kumacandelo oyilo.
Ukudala imizobo yeenkqubo zangaphandle zegesi ngokunxulumene neendlela zombhobho wegesi, ukunxibelelana kokuvalwa, indawo kunye nobungakanani bokuma kwamahhala kunye neebhokisi zeerhasi.
Ukuyilwa kweeprofayili kunye nemizobo yoyilo.
• Ukumiselwa kokuhamba kwegesi kumacandelo enkqubo yegesi yangaphandle.
Ukubalwa koxinzelelo kwehla kwimigca yangaphandle yenkqubo yegesi.
Ukuqinisekiswa kwenkqubo yegesi eyilelwe ukulungiswa.
• Ukuveliswa kwengxelo yoyilo.
• Ukubala ukubalwa kwe-hydraulic.
Ukubanakho ukongezwa okukhawulezayo nokulula kwedatha kwilayibrari yenkqubo ephambili kunye nokukhethwa kweefolda eziza kusetyenziswa kuyilo lwenkqubo ethile.
Ukuveliswa kwee-invoice zezixhobo ezisetyenzisiweyo kwiprojekthi.
Ukuhanjiswa kwee-invoice zeemathiriyeli kwiinkqubo zoqikelelo lwexabiso.
[isihloko esilandelayo =] iArCADia Mófulos de Heating »
I-ArCADia BIM-Iimodyuli zokuFudumeza
UKUFAKWA KOKUFUDUKA KWE-ArCADia
INet: € 549,00
Yintoni i-ArCADia-HEALING INSTALLATIONS?
I-ArCADia-HEALING INSTALLATIONS yimodyuli ethile yenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumbono wolwazi lweModeli yoKwakha (i-BIM). Inkqubo ivumela ukwenziwa kwamaxwebhu obuchwephesha obuchwephesha bokufakelwa kombhobho kabini ngaphakathi kwizakhiwo ezinetekhnoloji yeBIM. Kwakhona, ivumela isizukulwana esizenzekelayo sokujonga kwe-axonometric, uluhlu kunye nokubalwa okuyimfuneko ukuphuhlisa amaxwebhu oyilo.
UKUFAKWA KWE-ArCADia-KULULA UKUZIPHATHA yimodyuli ethile yenkqubo ye-ArCADia BIM. Inkqubo ivumela ukuyilwa kwamaxwebhu obuchwephesha bobuchwephesha bokufudumeza kwangaphakathi kwizakhiwo. Yenzelwe iinjineli zoyilo zamaziko ococeko lwangaphakathi.
Inkqubo ivumela ukufakelwa kolwakhiwo lwezinto zokwenza umzobo kwisiseko solwakhiwo ngokudalwa kwangaxeshanye kwezikimu zokubala kunye nokuveliswa kweentlobo ezintathu zeembono ze-axonometric. Ukongeza, ivumela ukukhetha okuzenzekelayo kwezinto kuthathelwa ingqalelo kukhetho lomsebenzisi (ukhetho lweekhathalogu zokukhetha izinto) kunye nesizukulwane esizenzekelayo okanye ngeengxelo kunye neengxelo zezixhobo okanye izinto ezisetyenzisiweyo kwiprojekthi. Uyilo lunokwenziwa kwiimboniselo zezakhiwo ezenziwe kwinkqubo yokwakha i-ArCADia kwaye iphunyezwe kwimeko ye-CAD ngendlela yeefayile zeraster okanye yeefayile. Umsebenzisi unokusebenzisa ithala leencwadi lezinto ezisetyenziselwa ukufakela ukufudumeza, ezinokwandiswa kwaye zilungelelaniswe neemfuno zomsebenzisi ngokuxhomekeke kwizixhobo ezisetyenzisiweyo kunye neentlobo zezixhobo zombhobho. Ukongeza, kunokwenzeka ukuba kuphuhliswe itemplate yakho kunye nenketho yokugcina useto olungagqibekanga lwento nganye yenkqubo kwaye uyigqithise kunye neprojekthi.
Inkqubo ivumela ukujonga ukuchaneka kofakelo olwenziwe ngokwemibhobho ye-hydraulics kunye nokukhethwa kwezinto.
• Ukudalwa kwemizobo yofakelo lobushushu lwangaphakathi, ukusuka kumthombo wobushushu, kwimitha yobushushu kunye nemibhobho, kunye nokugqiba ngezixhobo ezifanelekileyo.
Ukufakwa kwabaamkeli ubushushu, okt ipaneli, egudileyo, igumbi lokuhlambela okanye irediyo, imibhobho yokufudumeza, izitshisi kunye neeyunithi zekhoyili
Ukubanakho ukufaka ukufakelwa kobushushu kumphezulu, njengokufudumeza umgangatho okanye udonga.
Ukufakwa kweentambo zemibhobho kunye neentambo zokuhambisa ezivela kwithala leencwadi elityebileyo leetyhubhu ezenziwe ngezinto ezahlukeneyo. Ubukho bokufaka kwangaxeshanye iintambo ezihambelanayo ezinemisebenzi eyahlukeneyo kunye nokunxibelelana kwazo ngobukrelekrele.
Ukufakwa kokufakwa kwezixhobo kunye nezixhobo ezivela kwithala leencwadi elibanzi labavelisi (iirisithi, ukuvalwa, ukubuya, ukhuseleko, izilungiso zohlengahlengiso, izixhobo zokulinganisa, amacebo okucoca, imingxunya ye-hydraulic, njl. Njl.
Ukufakwa kweentlobo ezahlukeneyo zezincedisi ezinemilo kunye nobukhulu obuzimeleyo, umzekelo, ii-boilers zokufudumeza, iinqanawa zokwandisa.
• Isizukulwana esizenzekelayo secandelo lezixhobo zonxibelelwano, kubandakanya ukhetho lokuziguqula.
Ukuququzelelwa komzobo kuvumela ukunxibelelana okukhawulezayo kunye nokulula kwee-radiator ezininzi, ukufakwa okuqhubekayo kwemizila yamacala athe nkqo nathe tyaba ekufakweni kunye notshintsho lomgangatho wezinto ezininzi zokufakwa ngaxeshanye; Ukufaka iinkqubo zesiqhelo kwithala leencwadi.
Ukufakwa kofakelo olwandisiweyo kwimeko ye-CAD kunye nokuguqulwa kwemigca ibe yimibhobho (izinto zenkqubo ye-ArCADia BIM).
• Uyilo oluzenzekelayo lwenqaku lamanqaku kunye nencazelo yokufakwa kunye nokukhethwa kokuyihlela. Ukudalwa kweetemplate zakho.
Ukudala iintlobo ezintathu zembonakalo ye-axonometric (kubandakanywa ukujonga okwethutyana) kunye nokukwazi ukwenza izinto ezifihliweyo zibonakale ngokuhamba nokunqumamisa amacandelo ekusebenzeni okufutshane; Ukufakelwa konxibelelwano lokuvala ngqo kumzobo we-axonometric ngokufakwa ngokuzenzekelayo kwimbono nakwoluhlu.
Ukubala ubalo loxinzelelo olusebenzayo kunye nelahleko noxinzelelo lwengcinezelo lwasekhaya kuzo zonke izekethe, umqondiso wesekethe ebalulekileyo.
Ukubalwa koxinzelelo olufunekayo kufakelo ngokuthathela ingqalelo kummiselo kusetyenziswa iioval ezivavanyayo.
Ukubonakaliswa kwamaxabiso eeparamitha ezifunekayo kwimpompo yesekethe: ukuphakamisa ukuphakama kunye nokusebenza ngokufanelekileyo.
Ukujonga ukufakwa ngokuchanekileyo kokudibana.
• Ukunyulwa ngokuzenzekelayo kwimibhobho, ukufakelwa, iioval zethomali, ukuvalwa kwezixhobo, njl., Kuthathelwa ingqalelo imigaqo yangoku.
Ukudaleka kwengxelo yokubala, amatyala ezinto ezisetyenziswayo, izixhobo kunye nokunxibelelana okubandakanyiweyo kwiprojeki, enjongo yayo ikukuqhubela phambili kunye nokuphunyezwa kwengqikelelo yeendleko kunye nekowuteshini yotyalo-mali (ukuthumela ngaphandle eCeninwest kunye neenkqubo ezisemgangathweni).
• Ukudweliswa koluhlu lwabamkeli kumagumbi kunye noluhlu kuthathelwa ingqalelo uhlobo lokufudumeza kunye nomgangatho kwigumbi elinikiweyo, kubandakanya isakhiwo sakhiwo.
• Ukuba imodyuli ethile yecandelo ifakiwe njengembambano yesoftware ye-AutoCAD ®, ke imodyuli ye-ArCADia AC iyadingeka.
• I-OS: IWindows 10, Windows 8 okanye Windows 7
[isihloko esilandelayo =] iimodyuli zonxibelelwano zeArCADia]
I-ArCADia BIM-Iimodyuli zonxibelelwano
I-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 2
INet: € 701,00
Yintoni iArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS?
I-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS yimodyuli ekhethekileyo yenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumbono othi imodeli yolwakhiwo lwemodeli (BIM).
I-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS yinkqubo yokuyila amaxwebhu obuchwephesha bobugcisa bokuyila uthungelwano lonxibelelwano lwangaphandle (ifibre ye-fiber kunye nemidiya yobhedu). Le nkqubo yenzelwe abaqulunqi bomnatha wonxibelelwano bangaphandle kunye noyilo kunye neefemu zokwakha ezivelisa ingqiniseko yenethiwekhi, imizobo yamashishini, uluhlu lwenethiwekhi ekhoyo, kunye nabo bonke abo banxulumene nomzi mveliso wonxibelelwano.
Le yenye imodyuli yemveliso yenkqubo ye-ArCADia BIM, kwaye njengazo zonke iimodyuli zangaphambili inokusebenza njengembonakalo yesoftware ye-AutoCAD. Nawuphi na umsebenzisi we-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS unokudala ngokukhawuleza imizobo yothungelwano lwangaphandle lonxibelelwano kwizicwangciso zophuhliso lomhlaba okanye avelise umzobo wawo obonisa uthungelwano olukhoyo okanye uyilo ngokwezinto zalo ezinokuhamba nje.
Ngenxa yohlobo oluthile loyilo lothungelwano lonxibelelwano lwangaphandle (isidingo sokwakha okanye sokwandisa iinkqubo zokuhambisa intambo zonxibelelwano ezisisiseko kunye nezesekondari, imibhobho yentambo, imigca ekhoyo okanye ecwangcisiweyo engaphezulu, ukwakhiwa ngokutsha kweentambo ezikhoyo) uyilo lweentambo ze-fiber optic kunye nemidiya yobhedu ngokunxulumene nezinto zenethiwekhi ezichaziweyo. Le nkqubo yenzelwe abaqulunqi beenxibelelwano zonxibelelwano zangaphandle. Nangona kunjalo, inokusetyenziswa ziinkampani zoyilo kunye nezokwakha ezibonelela ngeengcingo zonxibelelwano zonxibelelwano, ukuveliswa kwemizobo yemizi-mveliso, uluhlu lwenethiwekhi esele ikho, kwaye ngabo bonke abo banxulumene nomzi mveliso wonxibelelwano. Inkqubo ibonelela ngoluhlu olupheleleyo lwezinto ezisisiseko ezisetyenziselwa ukwakha uthungelwano zonxibelelwano, kubandakanywa izintambo kunye nokupheliswa kweentambo zefayibha kunye nezentambo zobhedu eziphakathi nendawo kwizakhiwo zesiphelo.
Ithala lencwadi linokusetyenziselwa ukuyila uthungelwano lonxibelelwano. Izinto zinokuhlelwa kwaye zinikwe iiparameter. Ukongeza kwimbonakalo yokuvelisa imizobo kunye nemizobo ngokufanelekileyo, inkqubo yenza ukubala okuyimfuneko kuyilo oluchanekileyo lwenethiwekhi. Umdibaniso wemisebenzi ekhethekileyo esetyenzisiweyo kwesi sicelo kunye nokukwazi ukwenza ukubala kunye nokutshekishwa kwenethiwekhi eyilelweyo kunika isixhobo esifanelekileyo sokwakha uyilo lonxibelelwano lwenethiwekhi kusetyenziswa intambo yefibre yokukhanya kunye nobhedu oluphakathi.
Inkqubo ye-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS yenza uyilo lothungelwano lonxibelelwano lwangaphandle kwindlela: indlela enye yokuhambisa (ukupheliswa kwentambo: isakhelo sokuhambisa, ikhabhathi yangaphandle, ibhokisi yeentambo) -endlela enye yomnxeba wonxibelelwano - isakhelo kofakelo lonyuso (ukupheliswa kwesiphelo sentambo: ikhabhathi yokuhanjiswa, ikhabhathi yangaphandle, ibhokisi yentambo, ukucinywa kwekhebula kwisakhiwo), kunye naluphi na ulungiselelo kwenethiwekhi, kubandakanya ukwahlulahlulahlula izinto zayo.
• Uyilo lweesistim zekhebula zangaphantsi nangaphezulu kunye nemibhobho yentsimbi.
• Uyilo lweenqwelo moya.
Ukuyilwa kweentambo zefayibha kunye nezentambo zobhedu eziphakathi (kubandakanya uthungelwano nonxibelelwano ngentambo) kusetyenziswa isiseko sendlela yokunxibelelana.
• Ukuqinisekiswa kwamacandelo entambo eyakhiweyo, intambo ekhethiweyo kunye nokudityaniswa kwezinto ezisele ziyilo.
Ukudaleka kwengxelo yokubala, njengokuhlahlelwa kokungeniswa, uluhlu lwecandelo leentambo, inkcazo yendlela yentambo, uluhlu lwamacandelo enkqubo yedreyini yentsimbi neyokuqala.
Ukudala imizobo yokuhambisa ikhebula, umzobo ophambili wendlela yokuhambisa ikhebula, imibhobho yentsimbi, uluhlu lwezinto zeprojekthi okanye izinto ezikhethiweyo zomgca.
• Ingxelo yento ekhethiweyo okanye iqela lezinto.
Ukukhuphela kwelinye ilizwe izinto ezisetyenziswayo ukuya kwiinkqubo zoqikelelo lwexabiso.
Inkqubo inika ithuba elipheleleyo lokuqalisa kunye nokugqiba umsebenzi nakweyiphi na indawo kwinethiwekhi. Kwakhona, inkqubo inokusetyenziselwa kuphela ukuyila inkqubo eyintloko ye-duct duct, umngxunya we-cable drain, okanye icandelo lombhobho wentambo. Ngenxa yomyalelo ofunwayo wokwakhiwa kwenethiwekhi entsha okanye ulwandiso kwenethiwekhi esele ikho (okokuqala, intambo yedrafti yenkqubo yedisk okanye imibhobho yentambo kufuneka yakhiwe, emva koko, iintambo zingabekwa phezu kwabo okanye ukwakha inethiwekhi yomoya), ekuphela kwesithintelo ekuyileni kweentambo zonxibelelwano kukuchaza kuqala izinto ezichazwe ngasentla kwinethiwekhi. Xa imigca yentambo yangaphandle yenzelwe kwizicwangciso zophuhliso lomhlaba, umyili uyakhawuleza ukufumana ingxelo yokulungiselela uludwe lwendlela (ngohlobo lwengxelo ye-RTF) kwiindawo ezibalulekileyo zenethiwekhi (iindawo zomgca wepivot, imingxunya yokutsala) intambo, izibonda zomphezulu ongaphezulu, iibin zekhebula). Le nkqubo ikwabonelela ngamathuba okwenza ukubala okuyisiseko, ukuvelisa iingxelo kunye nokuqinisekisa izinto eziyimfuneko zenethiwekhi.
I-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 2 MINI
INet: € 145,00
Yintoni iArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI?
I-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI yimodyuli ethile yenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumbono wolwazi lweemodeli zolwakhiwo (i-BIM).
I-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI yenza uphuhliso loxwebhu loyilo lothungelwano lwangaphandle kunye neenethiwekhi zonxibelelwano ngobhedu. Le nkqubo yenzelwe ikakhulu iinjineli zothungelwano zonxibelelwano zangaphandle kwaye ziyile kwaye zenze neenkampani ezinokwenza isivumelwano kunye nemizobo yenethiwekhi, imizobo ekhethekileyo kwicandelo, ukuhlanganisa uluhlu lwenethiwekhi ekhoyo nako konke abantu abasebenza kwishishini lonxibelelwano.
Umda we-ArCADia-TELECOMMUNICATIONS NETWORKS MINI kwinkqubo xa kuthelekiswa nohlobo olupheleleyo zezi:
Ukuyalela ukuvelisa iingxelo zokubala kunye neembono ezingafumanekiyo:
-Omjonga konke kweekhamera zekhebula
Inkcazo ebanzi yamacandelo aphambili enkqubo yokuhambisa amanzi amdaka
Inkcazo -umbala wolungelelaniso lwamanqaku aphezulu
-Ubhaliso lwendlela yefibre ye-fiber optic
-Ubhaliso lwamacandelo e-fiber optic
-Uphononongo kokucekecekiswa kwefibre ye-fiber optic
-Ubhaliso lwendlela yothungelwano lonxibelelwano
-Ukubhalwa kwamacandelo eentambo zonxibelelwano
-Ukuphononongwa kunye nokuphononongwa kokuthintelwa kweendlela zekhebula
Uluhlu lwenkangeleko yoluhlu lweeprofayili kunye noluhlu lwezihlanganisi kwizakhiwo: azifumaneki
• Imaphu yemodyuli yezakhiwo kumbono we-3D: ayifumaneki
• Ubukho bokufumana ukungqubana kwisakhiwo semodyuli: asifumaneki.
[isihloko esilandelayo =] Unikezelo lwamanzi eArCADia »]
I-ArCADia BIM-Iimodyuli zokuBonelela ngaManzi
UKUFAKWA KOKUFAKWA KWAMANZI KWI-ArCADia-2.0
INet: € 689,00
Yintoni i-ArCADia-AMANZI OKUFAKWA KWAMANZI
UKUFAKWA KWAMANZI KWI-ArCADia-AMANZI YIMFUNEKO yimodyuli ekhethekileyo yenkqubo yeArCADia BIM, esekwe kulwazi lweModeli yoKwakha iModeli (i-BIM). Inkqubo inokusetyenziselwa ukwenza amaxwebhu obuchwephesha obuchwephesha beenkqubo zonikezelo lwamanzi ngaphakathi kwisakhiwo. Le nkqubo yenzelwe abaqulunqi beenkqubo zangaphakathi zokukhuphela amanzi.
Le nkqubo inceda ukufakelwa okujolise ngqo kwinto yokuzoba kwimizobo yangemva yoyilo, kubandakanya ukudalwa kwemizobo yoyilo kunye nokuveliswa kweentlobo ezintathu zoqikelelo lwe-axonometric. Ukongeza, inkqubo ivumela ukhetho oluzenzekelayo lwezinto, kuthathelwa ingqalelo ukhetho lwabasebenzisi (izinto ezikhethiweyo kwiikhathalogu) kunye nesizukulwana esizenzekelayo seengxelo kunye nohlu lwezinto okanye izinto ezisetyenzisiweyo kuyilo. Iinkqubo zonikezelo lwamanzi zingenziwa kwizicwangciso zokwakha eziveliswe kwinkqubo ye-ArCADia-ARCHITECTURE kwaye ziyilelwe kwimeko ye-CAD ngohlobo lwe-bitmaps okanye iifayile zevektha. Umsebenzisi unokusebenzisa ithala leencwadi lezinto ezisetyenziswa kwiinkqubo zonikezo lwamanzi, ezinokwandiswa kwaye zilungelelaniswe neemfuno zabo kwicandelo loomatshini abasetyenzisiweyo kunye neentlobo zento yombhobho. Itemplate yomsebenzisi inokulungiswa, kubandakanywa nokukwazi ukugcina useto olungagqibekanga lwesiko kwinto nganye yenkqubo kwaye uyigqithise kunye noyilo.
Inkqubo inokusetyenziselwa ukungqinisisa inkqubo eyilelwe ngokwamanzi amancinci kunye nokukhethwa kwezixhobo.
• Imizobo yenkqubo yokuhanjiswa kwamanzi yangaphakathi iqinisekisiwe ukusuka kwindawo yoqhagamshelo, indawo yokuhambisa amanzi kunye nemibhobho yezinto ezifanelekileyo.
Iindawo zokuhambisa amanzi kunye neendlela zokuhambisa amanzi ziphawuliwe.
• Ukunyuka kwemibhobho kunye nokusasazwa kwemibhobho yamanzi kukhethwa kwilayibrari ebanzi yemibhobho eyenziwe ngezinto ezahlukeneyo. Inani lemibhobho ehambelana ngokuhambelana nemisebenzi eyahlukeneyo inokuqhutywa kwaye ixhunyiwe ngexesha elifanayo.
Iiplagi kunye nezixhobo zifakelwe kwilayibrari ebanzi yomenzi (iiplagi zamanzi, ukumisa kunye nokujonga iivalvu, ukhuseleko, umlilo kunye nokulawula iiplagi, izixhobo zeemitha, amacebo okucoca, umxube).
Ukufakwa kweendidi ezahlukeneyo zezixhobo ezineemilo ezisisigxina kunye nobungakanani (izixhobo zokulungiselela embindini wamanzi ashushu asekhaya, ubushushu bamanzi kunye noxinzelelo loxinzelelo).
• Isizukulwana esizenzekelayo seseti yento yokunxibelelana, kubandakanya ukubanakho ukuyiguqula.
• Imizobo yokuhambisa ivumela unxibelelwano olukhawulezayo nolula lwamacandelo okukhuphela amanzi, ukufakwa okuqhubekayo kweendlela ezithe nkqo kunye ezithe tye zendlela, kunye nokulungiswa kwenqanaba lezinto zenkqubo ngexesha elinye, ukugcinwa kweenkqubo eziqhelekileyo, kunye neendibano zokuhlangana kwamanzi kwilayibrari yenkqubo.
Ukufakwa kwenkqubo eyotyiweyo kwindawo ye-CAD kunye nokuguqula imigca ibe yimibhobho (izinto zenkqubo yeArCADia).
Uyilo oluzenzekelayo lwamanani amanqaku kunye neenkcazo, kubandakanya ukubakho kokuhlela. Ukudalwa kwetemplate yomsebenzisi.
Ukudala ezi ntlobo zintathu ze-axonometry (nayo inxenye) kunye nokwenzeka kokuwenza icace ngakumbi ngokuphelisa kunye nokunciphisa icandelo kwicandelo elifutshane. Amandla okufaka iivalvu zokumisa ngqo kumzobo we-axonometric, kubandakanya nokuqwalaselwa ngokuzenzekelayo kwisicwangciso kunye noluhlu.
Ubalo lwelahleko epheleleyo kunye nenxalenye yelahleko yoxinzelelo lwazo zonke okanye ezinye zeendlela ezikhethiweyo zokuhamba kwamanzi kunye nokukhethwa kweyona ndawo intle yasekhaya intle.
Ukubalwa kokulahleka kobushushu kunye nelahleko yoxinzelelo kwiinkqubo zokujikeleza, kubandakanya ukubanakho kokumiselwa kwemida efunekayo yentloko yokuhambisa kunye nomthamo weempompo zokujikeleza.
Imvume yeemeko ze-hydraulic ekubaleni kwenkqubo ene-hydrant esetyenziswayo ukulwa umlilo.
Ukuqinisekiswa kwenkqubo yokuqhagamshelwa ngokuchanekileyo.
• Ukukhetha okuzenzekelayo kwezinto zenkqubo, kuvumela imigaqo yangoku.
• Ukuveliswa kwengxelo yokubala, amatyala ezinto, izixhobo kunye nezinto zonxibelelwano ezibandakanyiweyo kuyilo lwenguqu olulandelayo.
UKUFAKWA KOLWAZI NGOKUGQIBELA 2
INet: € 593,00
Yintoni i-ArCADia-SEWAGE INSTALLATIONS?
I-ArCADia-SEWAGE INSTALLATIONS yimodyuli ethile yenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumbono wolwazi iModeli yoLwakhiwo (BIM). Le nkqubo inokusetyenziselwa ukwenza amaxwebhu anobuchule bokuyilwa kwenkqubo yokuntywila kwimizobo yangemva yoyilo. Le nkqubo yenzelwe abaqulunqi beenkqubo zangaphakathi zokukhuphela amanzi.
UKUFAKWA KWE-ArCADia-ISIMA SEENDAWO zivumela ukufakelwa okusekwe kumda wezinto zokuzoba kwimizobo yangasemva yoyilo, kubandakanya ukwenza imizobo yoyilo kunye nokuvelisa izandiso kunye neeprofayili. Umsebenzisi unokuyila inkqubo yokukhupha amanzi ngokuchithwa kwamanzi amdaka avunyiweyo: grey kunye namanzi amnyama, amanzi emvula (kwiindawo ezinemibhobho yokukhupha kwisakhiwo okanye xa kufanelekile ukuqhuba imibhobho ephumayo phantsi komgangatho wesakhiwo. ) kunye nenkqubo yamanzi amdaka. Imizobo yesicwangciso inokuveliswa kwimizobo yangemva yolwakhiwo ngohlobo lwe vector okanye iifayile ze-bitmap.
Umsebenzisi unokusebenzisa ithala leencwadi lezinto ezisetyenzisiweyo kwiinkqubo zokuhambisa amanzi, ezinokwandiswa kwaye zilungelelaniswe neemfuno zomsebenzisi ngokwezixhobo ezisetyenzisiweyo kunye neentlobo zemathiriyeli yombhobho. Itemplate inokulungiswa, kubandakanywa nokukwazi ukugcina useto olungagqibekanga lwento nganye yenkqubo kwaye iyigqithise kunye nolwakhiwo phakathi kweendawo zokusebenzela ezininzi.
Ekuqaleni, umsebenzisi ukhangela izinyusi zeqela labamkeli, kubandakanya ukubanakho ukufumana indawo ekuhlalwa kuyo (phantsi kwemfezeko yomgangatho) yokungena komoya kunye neendlela zonxibelelwano ezithe nkqo. Ukwenza oku, faka ubunzulu bomgangatho kunye nokuphakama kwenqanaba (i-ArCADia-ARCHITECTURE yolwakhiwo lwejometri yolwakhiwo luya kuveliswa ngokuzenzekelayo).
Ukudityaniswa kwesixhobo kwii-risers kungenziwa kwaye imithwalo ye-hydraulic inokuchazwa kwisiseko, esiya kuthi emva koko sivumele ububanzi be-riser ukuba bugqitywe. Le nkqubo ivumela inkcazo yezinto ezikwiindawo ezithe tyaba kunye ezithe nkqo: zokucoca, ukucoca iindawo ezivulekileyo, amagumbi okungena, izinto zentsimbi (iiflothi zesiphango) kunye namakhethini okuwisa.
Inkqubo eyandisiweyo / egcweleyo yenkqubo isekelwa kwidatha esuka kwinani lezixhobo eziqhagamshelwe kwisinyusi kunye nenkqubo yokuntywila.
Inkqubo ivelisa iiprofayili zobude obude benkqubo esekwe kwigradient emiselweyo, imilinganiselo emiselweyo, kunye nedatha yonyawo lomtya nezinye izinto. Iiparamitha ezizimeleyo, umzekelo, ubukhulu, bunokuchazwa ngakumbi kwiprofayili evelisiweyo, eya kuthi iqwalaselwe kwimodeli jikelele yenkqubo yokuhambisa amanzi.
Ukufakwa kweendlela zombhobho kwinkqubo yokuntywila, kubandakanya indawo esekwe kwigadi, ukuqala kwindawo yokukhupha ngekhamera yokuhlola ukuya kwizixhobo zococeko, ukunika ingxelo ngeendlela zokuhambisa amanzi amdaka.
Ukufakelwa kweendawo zokulahla, i-rigging, ii-cleanouts kunye nokufakwa ngokuzenzekelayo kweeCoutouts kwinqanaba lokukhupha. Ukunikezela idatha yesimo kubo.
Ukufakwa kwemibhobho, kubandakanya ukwahlula ngokuzenzekelayo kwimida, imibhobho kunye nokudityaniswa kwesibane, ithala leencwadi elibanzi lezinto.
• Isizukulwana esizenzekelayo seseti yoqhagamsheleko lonxibelelwano, kubandakanya ukubakho kokutshintsha nokubonisa ezi zinto kuzo zonke imizobo.
• Ukuzoba isibonelelo esivumela indlela ekhawulezayo nekulula yokwenza uqhagamshelo ngenani leedreyini ngaxeshanye, kuxhomekeka kwindlela yonxibelelwano kunye nokusetyenziswa okujongiweyo kwento efakiweyo. Ukukhethwa kwemibhobho yokuqhagamshela ukusuka kwizikhanyiso ukuya kwizinyusi ukusuka kwiikhathalogu zabavelisi abaninzi.
• Ukufakwa okuqhubekayo kweendlela ezithe nkqo kunye ezithe tye zamacandelo enkqubo, ukutshintsha amanqanaba ezinto zenkqubo ngaxeshanye. Izinto eziqhelekileyo zenkqubo zingagcinwa kwilayibrari yenkqubo.
• Uyilo oluzenzekelayo lwenqaku lamanqaku kunye nenkcazo yenkqubo, kubandakanya ukukwazi ukuhlela nokwenza itemplate yomsebenzisi.
• Isiphelo esizenzekelayo sokwandiswa kwesandiso: imingxunya, izinyuko, udibaniso lwombane, kubandakanya ukufakelwa kunye nezixhobo zenkqubo yokuntywila. Unokwenzeka lokuhlela nokulungisa izinto ukusuka kwinqanaba lendiza eyandisiweyo. Ukushitshiswa kwemizila emide yokuhambisa amanzi kunye nokuntywila okuzenzekelayo kwiplanethi eyandisiweyo ukwenza umzobo uqondakale ngakumbi.
• Ukuvelisa ezizenzekelayo kwimibhobho yokuntywila kunye neefayile ezithe nkqo, kubandakanya ukungqubana nezinye iinkqubo zeemodyuli zenkqubo ye-ArCADia. Ukuqwalaselwa kwezinto eziqhagamshelayo kunye nonxibelelwano.
Ukubalwa kwamanqanaba okuhamba kwecandelo, amanqanaba okugcwalisa kunye nesantya. Ukumiselwa kweedayimitha zecandelo lamanzi, imibhobho ethe nkqo, imibhobho yokuhambisa amanzi kunye neegradi.
• Umboniso we-3D wenkqubo yerhasi eyenza kube lula ukulungisa indlela engabonakaliyo yombhobho kwisicwangciso.
Ukuqinisekiswa kwenkqubo yokuqhagamshelwa ngokuchanekileyo kunye nendlela eqondakalayo yokufumana kunye nokulungiswa kweempazamo ezivumela ukuhlelwa ngokukhawuleza kwezinto kunye neendawo zazo.
• Ukuveliswa kwengxelo yokubala, iibhili ezincedisayo, izixhobo kunye nezinto zonxibelelwano ezibandakanyiweyo kuyilo lwenguqu olulandelayo.
• I-ArCADia ye-LT okanye i-ArCADia ye-10 okanye i-ArCADia PLUS 10 okanye isoftware ye-AutoCAD ® yeenguqulelo ze-Autodek zika-2014/2015/2016.
[isihloko esilandelayo =] I-ArCADia Iimodyuli ezongeziweyo]
I-ArCADia BIM-Iimodyuli ezongezelelweyo
INet: € 206,00
Yintoni iArCADia-ESCAPE Iindlela?
Iindlela ze-ArCADia-ESCAPE yindlela yemveliso ethile yenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumbono lowo ongumzekelo wolwazi olwakhiwayo (i-BIM). Le nkqubo inokusetyenziselwa ukwenza uthungelwano lweendlela zokufuduka kwizakhiwo. Iindlela zokufuduka zinokujongwa kwaye ziprintwe ngokobukhulu obuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzisi Le nkqubo yenzelwe iinjineli, abakhi bezinto zokwakha kunye nabakhi okanye abantu abaphethe kulondolozo lwezakhiwo zenkonzo yoluntu.
Inkqubo le yimodyuli eyongeziweyo yenkqubo ye-ArCADia-QALA kwaye yandisa ukusebenza kwayo ngamanqaku ayimfuneko ukwenza iimephu zobuchwephesha zobungcali.
Umsebenzisi weendlela ze-ArCADia-ESCAPE unokukhawuleza enze izicwangciso zokwakha, kubandakanya ukubonwa kweendlela zokuphuma.
Ezi zicwangciso kufuneka zifumaneke kwizakhiwo zenkonzo yoluntu (iihotele, iivenkile ezinkulu, njalo njalo) ukunceda abantu abaphakathi kwabo ukuba bafumane indlela yokubaleka ngokukhawuleza esakhiweni xa kukho umlilo okanye enye into. imeko yongxamiseko. Umsebenzisi unokudala iimephu zokufudusa ngokusekwe kulwakhiwo olukhoyo kunye nezicwangciso zophuhliso lomhlaba (iifomathi: I-DWG, i-IFC, i-DXF) okanye benze imizobo yabo emele indawo ethile besebenzisa izixhobo zenkqubo ye-ArCADia.
Le nkqubo inikezela isimboli kunye nelayibrari yetafile yokukhuselwa kunye nokukhutshwa kwindawo apho umlilo. Umxholo wethala leencwadi unokuhlelwa.
Phakathi kwezinye, Iindlela zeArCADia-ESCAPE zingasetyenziselwa:
• Yenza kwaye uprinte imephu yokufuduka ngokusekelwe kuqikelelo olwenziwe e-ArCADia,
• Yenza kwaye uprinte imephu yokufuduka ngokusekelwe kuqikelelo olungeniswe kwezinye iinkqubo (iifomathi: DWG, DXF, IFC),
• Yenza ngokuzenzekelayo izihlokwana, kubandakanya neenkcazo zezixhobo neesimboli ezisetyenzisiweyo,
• Siza ngokukhululekileyo imephu yokufuduka yabonwa.
Le nkqubo iqulethe:
• ithala leencwadi elineempawu ezifanelekileyo ezenziwe kunye neebhodi ezifikelela kwimigangatho yomzi mveliso,
• imisebenzi elula nekulula ukuyisebenzisa kwiindlela zokufuduka kombala,
• iitafile ezenziwe ngomumo, kubandakanya neenkqubo kwimeko zomlilo okanye iingozi,
Imisebenzi ebonakalayo yendawo yokufuduka kombala,
• imisebenzi ezenzekelayo yokumakisha iindlela zokufuduka,
• iisimboli, imibala kunye nezinye iimpawu zenkqubo zithobela imigangatho yaseYurophu i-ISO 23601 ngokunyanzelwa.
Kutheni le nto kufanelekile ukuthenga iindlela ze-ArCADia-ESCAPE?
• Isoftware eyodwa, engenayo umlingani wentengiso yasePoland.
• Inokwandiswa ngeemodyuli zoyilo zamanye amashishini okwakha.
• Idityaniswe nenkqubo ye-ArCADia-QALA, iyindawo esebenza ngokugqibeleleyo yemizobo yoyilo lwekhompyuter noncedo lwenkxaso yefomathi ye-DWG, ehambelana nenkqubo ye-AutoCAD.
• Inkqubo inokusebenza njengombethe isoftware ye-AutoCAD ka-2011/2012 / 2013- / 32-bit software.
INet: € 236,00
I-ArCADia-SURVEYOR yimodyuli emiselweyo yenkqubo yeArCADia BIM, esekwe kumbono wolwazi iModeli yoLwakhiwo (BIM).
Le nkqubo ixhasa ukulungiswa kwamaxwebhu obuchwephesha bezicwangciso zeempahla kunye necandelo lomnqamlezo, njengempahla yolwakhiwo kunye nengxelo eyenziweyo. I-ArCADia-SURVEYOR yenza ukuba ukuqokelelwa kwedatha ngaphandle kwamacingo kwizixhobo zokulinganisa zombane kusetyenziswa itekhnoloji yeBluetooth kunye nokufakwa kwayo ngqo kwinkqubo ye-ArCADia BIM. Ukufumana uninzi kule nkqubo, kufuneka ikhompyuter yakho kunye nekhompyuter kunye nobuchwephesha bemitha, kuba ivumela ukuhanjiswa kwedatha kunye neziphumo, njengoko kuthathwa amanyathelo.
I-ArCADia-SURVEYOR isebenzisana nezi zixhobo zilandelayo zokuvavanya umatshini:
I-Leica DISTO A6,
I-Leica DISTO D8
I-Leica DISTO D3a BT
• Leica DISTO D510 BT (kuphela kwiWindows 8,1 nakwiWindows 10!)
• Leica DISTO D810 BT (kuphela kwiWindows 8,1 nakwiWindows 10!)
• I-Bosch: 100C ye-GLM yobungcali.
Kutheni le nto kufanelekile ukuthenga i-ArCADia-SURVEYOR?
Imizobo ye-3D yamagumbi inokulungiswa ngesiseko sedatha eqokelelwe kwizixhobo zokulinganisa zombane ezixhotywe ngetekhnoloji yeBluetooth:
okanye Leica DISTO A6,
okanye Leica DISTO D3a BT,
o Bosch: 100C GLM yobungcali.
Sebenza ngokuthe ngqo kwinkqubo ye-CAD kumzobo kwifomathi ye-DWG, kubandakanya ukukwazi ukwenza izilungiso kwangoko.
Le nkqubo inesisombululo esisebenzayo nesinamalungelo okushicilela, esidibanisa ngokulula amagumbi okulinganisa kunye nemigangatho yemigangatho kwizicwangciso zemigangatho kwisiza.
• Ngokudibeneyo kunye nemodyuli ye-ArCADia-QALA, inkqubo inikezela ngendawo esebenza ngokugqibeleleyo yemizobo ye-CAD, evumela ukulungiswa kwemizobo kwifomathi ye-DWG, nayo ngaphandle kwemitha yomgama.
[isihloko esilandelayo =] IArCADia Construcción »
IKHODI YOKUQINISEKISA NGE-ArCADia-UKUQINISA
INet: € 314,00
I-ArCADia-UKUQINISA IMBONELEKO YEKHOMPU yimodyuli engqamene nenkqubo yeArCADia BIM, esekwe kumgaqo wolwazi wokwakha (BIM). Isicelo senzelwe abaqulunqi bokubumba kwaye benzelwe ukuxhasa umsebenzisi ukuya kufikelela ngexesha lokuphuhliswa kwezicwangciso zekhonkrithi eziqinisiweyo kwizicelo ze-CAD.
I-ArCADia-IQINISEKILE INDAWO YOKUQINISEKISA sisixhobo esisekelwa kwinto isebenzisa idatha ye-2D engeniswe ngumsebenzisi (ngendlela yeembono namacandelo) ukwenza imodeli yokuqinisa ikholamu ye-3D enokulungiswa ngokukhululekileyo kwaye ivumele, umzekelo, indalo. zamacandelo amatsha. Ukuqiniswa kwento eyilwe kunye nesi sicelo kuhambelana neemfuno ze-EN 1992-1-1 i-Eurocode 2: EyoMsintsi ngo-2008. Isicelo sivumela umyili ukuba afake idatha yokuqinisa ngesandla kwaye ikhuphe idatha ngqo kwizicelo zobalo : Imodyuli ye-EuroFerroConcrete ye-R3D3 3D Isakhelo kunye ne-R2D2 2D Isakhelo sesoftware, kunye nekholam yeKhonkrithi yePN-EN yeNkxaso yomakhi. Kuyenzeka ukuba ukope ikholamu ekhethiweyo, esele igqityiwe kwifayile enye okanye enye ebikade ilungiselelwe.
Isakhono sokuyila iikholamu ezininzi kwifayile enye.
Isakhono sokwenza ifayile entsha ngokukhuphela iikholamu ezigqityiweyo kwimizobo ebigqityiweyo okanye ngokukhuphela iikholamu kwifayile enye.
Isakhono sokuyila iJometri kunye nokomeleza kwento kwimibonakalo emibini okanye emine kunye nenani leqela lezinto ezingamacandelo.
Ulawulo olupheleleyo lokubonakala kokuzoba kunye nokuprintwa kweemboniselo kunye namacandelo kunye nezinto zalo, kunye nokunokwenzeka kokutshintsha phakathi kwabo ngelixa besebenza nemodeli.
• Ukuhamba okungapheliyo kunye nokongezwa kwamacandelo amatsha kwikholamu.
Ukubanako ukwenza phantse naluphi na ubume becandelo lekholamu: uxande, umjikelezo, umlinganiso, T-umilo, C-umilo, Z-umilo kunye no-I wenziwe kunye nezinto ezihlanganayo phezulu kwikholamu. : Iibhrakhi ezikumgangatho ophezulu kunye neekholamu okanye iibhulethi ezinqamlezileyo ezifikelela kubude bazo.
Kwimeko yeekholamu zecandelo elingunxantathu, inkxaso yokudala ngokuzenzekelayo yokuqiniswa kobude obude ngenketho yokuzisongela ngokuzenzekelayo kwizibambisi ezinqamlezileyo okanye ukufakwa kwikholamu yenqanaba eliphezulu.
Ukudalwa okuzenzekelayo kwecandelo lekholam yecandelo lokuqiniswa ngendlela enqamlezayo ngohlobo lokuphindaphindwa kwemilenze emibini, emine kusasazwe kwiindawo ezichazwe ngumsebenzisi.
Ukudalwa okuzenzekelayo kwekholamu eqinisayo enqamlezayo yokuqinisa eminye imilo yecandelo.
• Ukutshintsha kwendawo eshukumayo yemilenze emine ngaphakathi kwecandelo lekholamu.
• Ubungakanani bokuqiniswa okufumaneka kwiiyunithi zeemilimitha (mm) okanye cm, ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo.
• I-radii efunekayo ye-bar yoqwalaselo ithathelwa ingqalelo ngokuzenzekelayo.
I ubude be-anchor yebar ye-longitudinal ithathelwa ingqalelo ngokuzenzekelayo xa igobe kwi-crossbars kwaye ifakwe kwikholamu ekumgangatho ophezulu, kwimeko yeecalaxande kunye neekholamu ezijikelezileyo.
• Ikhuselo lokuqinisa kunye nokuhambisa elinokugqithisa elithunyelwe ngaphakathi kwento eyomeleziweyo ithathelwa ingqalelo ngokuzenzekelayo.
Isakhono sokuyila imida yehhala.
• Ubume kunye neepropathi zentsimbi yokuqinisa ziyahlengahlengiswa.
• Izixhobo zokuhlela zivumela ukuqiniswa ukuba kufunyanwe ngokukhululekileyo kwizimvo nakwinxalenye yecandelo.
Ukukhutshwa ngokuzenzekelayo kwemivalo kunye nobungakanani kunye neenkcazo (iinkcukacha ze-bar).
Ukuqiniswa kwenkcazo yebha yokuqiniswa kunokubekwa naphi na ngaphakathi kweemboniselo kunye neziqendu zezinto.
Ukubala okuzenzekelayo nokuqhubekayo kokubhalwa kwentonga nganye kwifayile enye.
• Ijometry yokunciphisa ikholamu inokutshintshwa ngokukhululekileyo.
• Ukuyilwa okuzenzekelayo kunye noluhlu luluhlu lwentsimbi yokuqinisela olusekwe kwimodeli yokuqinisa eyakhiweyo (uluhlu olugubungela into enye okanye umzobo uphela).
• Ukuvelisa ngokuzenzekelayo imodeli yekholomu eqinisiweyo esekwe kubalo olwenziwe kwimodyuli ye-EuroFerroConcrete ye-R3D3 3D Isakhelo kunye ne-R2D2 2D yesicelo seSakhelo kunye nekholam ikhonkrithi eqinisiweyo yemodyuli ye-PN-EN yesicelo sokwakha.
Ukujonga kwe-3D imodeli yokuqinisa ikholamu eyenziweyo.
INet: € 368,00
Yintoni iArCADia-UKUQINISEKISA UKUQHUBEKELA I-SLAB?
I-ArCADia-UKUQINISA IMBONELELO YOKUGQIBELA I-SLAB yimodyuli ethile yenkqubo yeArCADia BIM, esekwe kumgaqo wolwazi wokwakha (BIM).
Le nkqubo yenzelwe iinjineli zokwakha. Injongo yesicelo kukubonelela ngenkxaso ephezulu yabasebenzisi ekuphuhliseni imizobo eneenkcukacha ezigqityiweyo zekhonkrithi eqinisekisiweyo kwinkqubo yeCAD.
I-ArCADia-UKUQINISEKISA UKUQINISEKISA I-SLAB yinkqubo eyakhiweyo, eyakha imodeli yendawo yokuqiniswa kweslab, ivumela ukuhlelwa okulandelayo kwaye, umzekelo, ukudalwa okuzenzekelayo kwamacandelo omnqamlezo omtsha weslab, ngokusekwe kwidatha efakwe ngumsebenzisi, Ifom yeemboniselo zeendawo eziphezulu kunye nezantsi zokuqinisa iipleyiti zeslab kunye namacandelo ezinqamlezo zento. Ukuqulunqwa kwetafile yokuqinisa i-slab kule nkqubo kunokwenzeka ngokusekwe kwizikhokelo ezichazwe kwi-PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Septemba 2008 standard. Le nkqubo ivumela idatha kwisimo kunye nenkxaso yesilayitha yinjineli yoyilo kwaye ibambe idatha kwisakhelo kunye nenkxaso yeslab ngqo ukusuka kwinkqubo ye-ArCADia-ARCHITECTURE esekwe kwisilinganisi esisekwe. Ukuba inqanaba elinikiweyo kumgangatho we-ArCADia-ARCHITECTURE unophahla oluninzi, lonke uphahla emva kokhetho lwakho lutshintshelwe kwinkqubo ye-ArCADia-REINtageCED CONCRETE SLAB njengemodeli eyahlukileyo yendlela eqinisiweyo yekhonkrithi.
Inkqubo ye-ArCADia-UKUQINISA YOKUQINISEKISA SLAB ibandakanya ezi zinto zilandelayo kunye nokubanakho:
Isakhono sokuyila izilayidi ezininzi ngaphakathi koxwebhu.
• Amandla okudlulisela iizikeyiti kubandakanya iimeko zenkxaso yazo kwimodeli yokwakha kwinkqubo ye-ArCADia-ARCHITECTURE.
Isakhono sokwakha ijiyometri kunye neplabhu yokuqiniswa kweslab kwiindawo ezimbini eziphambili zokujonga ezichazwe ngokwahlukeneyo kumacwecwe okomeleza angaphezulu nangaphantsi, kunye nenombolo yamacandelo emnqamlezo yeslabha ecingelwayo.
• Ulawulo olupheleleyo lokubonakala kokuprinta kunye nokuprintwa kweembono kunye namacandelo anqamlezayo kunye nezinto zazo, kunye nokukwazi ukutshintshela phakathi kwabo xa besebenza kwimodeli.
• Ukulungiselela indawo yasimahla kunye nokongezwa kwecandelo lesiphambuko esitsha, kunye nokuqiniswa kwecandelo lomnqamlezo wobunzulu bohlengahlengiso lwensimu.
Isakhono sokumisela ngokukhululekileyo ukujikeleza kwesalab kunye nezixhasi zayo ngohlobo lweendonga, iikholamu kunye nokudibanisa, kunye nokwazisa ngokuvuleka kwawo nawuphi na umilo kwisaladi esiliweyo.
Ukufakwa ngokuzenzekelayo kwegridi yokunyanzela iigridi zayo nayiphi na imilo yesilabhu okanye isiqwenga sayo ngokulungiswa kokuqiniswa okufanayo okanye ukuguqulwa kwegridi kuzo zombini iindlela, kunye nokulungiswa kwendawo ethe tyaba (phezulu kunye nezantsi) ikhuselo lecala layo yonke imivalo.
Ukufakwa ngokuzenzekelayo kwegridi yokunyanzela iigridi kwindawo echaziweyo yomsebenzisi ngaphakathi kwesaladi eluxande okanye enye indlela.
Ukubanakho ukukopa iigridi ezichaziweyo kwindawo yendawo ephezulu naphantsi komgangatho, kunye naphakathi kwezi ndawo.
Ukukwazi ukugoba imivalo ukusuka kwigridi ephezulu ukuya kwigridi esezantsi.
Ukubanakho ukufaka uxinzelelo oluxineneyo lwesiqhelo kumacala omabini kwindawo ekhethiweyo yegridi kwaye wenze ikopi.
Ukubanakho ukufaka ukusikwa kwalo naluphi na ubume kwigridi engagqibekanga, kungakhathalekile ukuba kuvulwe kwisilabha.
Ukubanakho kokutshintsha kokuguqulwa kwegridi kunye nokuya kwicala eliphambili kunye nelesibini kwibhridi, kunye nokukwazi ukususa iigridi kwimivalo yomntu ngamnye (nayiphi na into edibanayo kwigridi iyasuswa kunye nokuyisusa).
• Ukuba nako kongezwa imigoqo nganye kwigridi kwicala eliphambili okanye lesibini (ukwenza ibhloko yegridi ide yakhiwe kwakhona).
Isakhono sokukopa iigridi zegridi (ezingavakaliyo emva kokuba zilungisiwe).
Ukukwazi ukuguqula ubude bebar zegadi enye (kude kwakhiwe kwakhona).
Ukubanakho ukuhambisa ukuhambisa yonke imigoqo kwigridi ngokulungiswa kwayo emva kokuyakha kwakhona (ngaphandle kokususa iigridi).
Ukukhupha ngokuzenzekelayo ukuhanjiswa kwemivalo yenethiwekhi egqithisileyo esekwe ngokupheleleyo kwindawo yenkxaso ye-slab (iindonga kunye nokudibana).
• Ubukho bokumisela ukufakelwa kwendawo yokubambela nkqo kwiindawo zenkxaso ethe ngqo ethe tyaba kwikholamu.
Ukufakwa ngokuzenzekelayo kwensimbi yokuqinisa ekusasazeni rhoqo iitafile eziphezulu zenkxaso.
• Ukulungisa ukuqiniswa kwiimilimitha okanye iisentimitha ngobuchule bokuseta ukuchaneka.
Ukufakwa ngokuzenzekelayo kwimitha efunekayo yokugoba ibha yokuqinisa.
Isakhono sokwenza i-rebar yayo nayiphi na into.
Unokwenzeka lokutshintsha iidayimitha kunye nepropathi yendawo yokuqinisa.
Ukukhutshwa okuzenzekelayo kwemivalo yokuqinisa, kubandakanya ubungakanani bayo kunye nenkcazo (iinkcukacha zokuqinisa imivalo).
Ukubanakho ukufaka ukufakwa kwamanani okubalwa kwezinto zokuqinisa islab kunye neenkcazo zabo zebar, kukonyuka rhoqo kubude bebar, ukunciphisa inani leenombolo ze-bar kwislab.
• Ufakelo lwasimahla lweenkcazo zokuqiniswa kumbono wezinto kunye neminqamlezo.
Ukubala amanani okuqhubeka ngokuzenzekelayo kuzo zonke iibha ezikuxwebhu okanye isilabheyisi.
Isakhono sokumisela ngokukhululekileyo ubukhulu bejometri yeslab.
Ukudalwa okuzenzekelayo kunye nolutshintsho kuludwe lwentsimbi yokuqinisa olusekwe kwimodeli yokomeleza eyenziweyo (uluhlu lwe-slab enye okanye uluhlu lomzobo uphela).
Ukujonga kwangaphambili imodeli eyenziweyo yokuqiniswa kweslabha kumbono we-3D.
[isihloko esilandelayo =] Izixhobo zeArCADia]
I-ArCADia BIM-Iimodyuli zeZixhobo
INet: € 144,00
Kwi-BIM (imodeli yolwazi yokwakha), oko kukuthi, kuyilo lwakhiwo olusekelezwe kwinto, IFC yenye yeendlela ezisetyenziswayo. Iifayile zale fomathi zithunyelwa ngaphandle kwaye zingeniswa kwiinkqubo ezinje ngeRevit, ArchiCAD, Tekla Struction kunye neAllplan, phakathi kwezinye. Iiprojekthi ezenziweyo kwinkqubo ye-BIM asizizo zakhiwo ezinemitha emithathu kuphela ezinesakhiwo esimiselweyo, kodwa izinto ezidlulisa ulwazi malunga nezinto zazo, umzekelo, izinto, nazo zonke izinto ezilandelwayo, amaxabiso kunye nedatha eyongezelelweyo enokuthi yabelwe into. I-ArCADia-IFC, kuhlobo olutsha lwenkqubo ye-ArCADia, itshintsha ukugxila kokufunda iifayile ze-IFC ngokungenisa ngaphakathi ngaphandle kokuguqula. Oku kuvumela imodeli ukuba ilayishwe ngokuchanekileyo ngakumbi kunye nayo yonke idatha yayo nayiphi na into yokwenziwa kwesakhiwo ngasinye. Izinto ezingaguqukanga zaba zizinto zenkqubo kwaye ngenxa yoko zonke iifayile zilayishwe kungakhathalelwanga imodeli engasafuneki ukuba ibe ye-analogous kwisakhiwo esikhoyo kwinkqubo ye-ArCADia. Naliphi na inani leefayile ze-IFC zingalayishwa kwi-ArCADia kwaye zinokudibana kunye neendlela zemodeli kwiprojekthi. Iimodeli zizimeleyo, ukanti xa yonke idatha yodluliselo idluliselwe ekuqinisekisweni koyilo ngokungqubana kwaye ifumana iinketho, umzekelo, iminqamlezo phakathi kwezinto zakhiwo kunye neendawo ezahlukeneyo, ngaphandle kokungeniswa njengemodeli I-IFC okanye idalwe ngeendlela zenkqubo yeArCADia.
• Ukungeniswa kwefayile ye-IFC kwaziswa njengemodeli yokuma yodwa kuyo nayiphi na iprojekthi. Inguqulelo entsha ikuvumela ukuba ungenise ifayile kuyo nayiphi na iprojekthi (entsha okanye indlela ekhoyo yemodeli yenkqubo ye-ArCADia) kwaye ulayishe iimodeli ezininzi ze-IFC kwiprojekthi. Imodeli engeniswayo ingalayishwa kusetyenziswa umbono olula wentelekelelo (kuphela ngemvulophu yento ebonisiweyo) okanye ngayo yonke imiphetho ebonakalayo.
• Ukulawulwa kwemodeli ye-IFC: ukongeza kunye nokususa iifayile ezingeniswe ngaphakathi.
• Amandla okuguqula indawo yemodeli kwindawo yeprojekthi, inokwenzeka yokuhamba phakathi kwe-X, kunye nenkqubo ye-Y kwindawo ephakame kakhulu elwandle.
• Ukufikelela ngokukhawuleza, kwiifestile zePropathi, kuzo zonke iiparameter ze-IFC izinto ezigcinwe kwinkqubo yoMthombo.
Ukuhlangana kweemodeli ze-IFC kunye neenkqubo ze-ArCADia kwiprojekthi enye; Ndiyabulela ngayo, ukungqubana phakathi kwazo zonke izinto okanye izinto ezibonisiweyo zazo zonke iimodeli ezikhoyo kwiprojekthi inokutshekishwa sele kwinqanaba lokuyila.
• Umsebenzi wonga iprojekthi ngepakeji yeprojekthi kunye nazo zonke iimodeli ze-IFC ezifakwe kuyo.
• I-OS: IWindows 10 okanye iiWindows 8 okanye iiWindows 7 (iiWindows 10 64-bit zinconyiwe)
[isihloko esilandelayo =] Umenzi we-3D we-ArCADia]
INet: € 57,00
Yintoni iArCADia-3D MAKER?
Umenzi we-ArCADia-3D ugcina iprojekthi ye-3D kwinkqubo ye-ArCADia BIM.
Inkqubo yeArCADia ineemodyuli ezilandelayo:
• UMenzi we-ArCADia-3D, unokukhetha ukonga iprojekthi ye-3D.
• Umbukeli we-ArCADia-3D, ovumela umsebenzisi ukuba ajonge iprojekthi ye-3D ngaphandle kokufaka iArcadia.
Zimbini izinto onokukhetha kuzo xa usindisa iprojekthi: okanye ngaphandle kwebrawuza leArCADia-3D Viewer. Isikhangeli, i.e.ArCADia-3D Viewer sinokukhutshelwa kwiwebhusayithi kwaye sifakwe ngokuzimeleyo kwisoftware ye-ArCADia BIM.
[isihloko esilandelayo =] IArCADia Umbukeli we-3D »
UMBONI we-ArCADia-3D [MAHHALA]
Khuphela le nkqubo:
Yintoni iArCADia-3D UMBONO?
I-ArCADia-3D Viewer sisicelo esimeleyo esivumela umsebenzisi ukuba ajonge iprojekthi ye-3D kwaye akhwele i-3D ejikeleze kubo ngaphandle kwesidingo sokufaka i-ArCADia. Nangona kunjalo, akunakwenzeka ukuguqula iiprojekthi ezibonisiweyo. IArcadia-3D Viewer nayo ingabandakanywa kwisiboniso esigciniweyo ngoMenzi weArcadia-3D kwaye inokuqaliswa ngeprojekthi eyenziwe kwinkqubo yeArcadia BIM.
Izinto ezisisiseko zenkqubo:
• Vula .A3D iifayile eziqulathe umboniso we-3D,
• Vumela ukuba babone isakhiwo ngemiqobo ekhethiweyo okanye imibala engqingqwa,
• Ivumela i-enamel yomgca wezinto ezikhethiweyo (zombane, amanzi amdaka, igesi, njl njl) ukwenza iprojekthi icace,
• Iprojekthi inokujongwa ngeendlela zemithi: I-Orbit Mode, indlela yeNdiza, kunye neMo yeGait.
[isihloko esilandelayo =] I-ArCADia isicatshulwa »
I-ArCADia-Umbhalo yibhrawuza yefayile entsha ye-RTF ebandakanyiweyo kwinkqubo. Isiphequluli sivula ngokuzenzekelayo xa kuthunyelwa ifayile kwifomathi ye-RTF, inethuba lokuhlela uluhlu lokuprinta, ukuprinta, ukufaka imifanekiso e-raster kunye nokugcinwa kwifomathi yeRFT, DOC, DOCX, PDF kunye ne-TXT.
[isihloko esilandelayo =] Amathala eencwadi e-ArCADia 3D]
I-ArCADia BIM-Ithala Leencwadi le-3D
INet: € 96,00
Yintoni iArCADia-GARDEN Library?
I-ArCADia-GARDEN Library yincwadi yofakelo ekumgangatho ophezulu wenkqubo ye-ArCADia BIM, esekwe kumbono woHlelo lweeNkcukacha zoKwakha (i-BIM). Ithala leencwadi linezinto ezingama-400 zegadi ezingaphakathi, iitrato kunye nezijikeleze izakhiwo. Phakathi kwazo kukho imithi kunye nezihlahla, iigazebos, iingcingo, iiphuli kunye echibini, iintente, ifenitshala yegadi kunye nezinto zendawo yokudlala encinci. Ithala leencwadi liluncedo ekuyileni imimandla ejikeleze iiprojekthi zokwakha.
INet: € 645,00
Inkqubo ye-R3D3-RAMA 3D yenzelwe iinjineli zokwakha. Isetyenziselwa ukubalwa kwe-static kunye nokunciphisa ubungakanani beplanethi kunye neenkqubo zendawo yomhlaba. Ngenxa yencazelo yomsebenzisi okhululekileyo kunye necacileyo, inkqubo ingasetyenziselwa kungekuko kuyilo kuphela, kodwa nakwinjongo zemfundo.
Idatha ingeniswe ngokuchanekileyo kwinkqubo, inkqubo yejometri yenkqubo inokuchazwa kusetyenziswa kuphela imouse. Inkqubo isebenza ngokusetyenziswa kohlobo lweCAD kunye nenkqubo yeArCADia-ARCHITECTURE. Iijenartha zomsebenzi ezisisiseko ziyafumaneka. Inkqubo iqulethe ithala leencwadi elibanda elijikelezayo kunye neeprofayili ezibiyelweyo, ikhonkrithi eyomeleziweyo kunye nezinto zomthi. Ingasetyenziselwa ukufakelwa ngokulula kwesicwangciso kunye neenkqubo zakwindawo yebar, zombini iinkqubo ezincinci zithathe inani lebar, kunye nezakhiwo ezikhulu ze-3D eziqukethe amakhulu eebha kunye neendawo. Ke ngoko, kunokwenzeka ukubala iinkqubo zokwakha ezinje: ngobuninzi beendlela ezahlukeneyo kunye neesakheji ezininzi, iiplanethi zetarati kunye neetrati, ithala le-lattice, izakhiwo zebar engaphezulu, i-bar grill, njl. Inkqubo ivumela ukusebenza kunye neemodyuli zokunciphisa ngokomgangatho we-Euro: i-EuroStal, i-EuroŻelbet kunye ne-EuroStopa.
Ukubala okungqongqo kweenkqubo zesithuba kunye nendawo yomhlaba enamacandelo aqhubekayo kunye nokwahluka kwebar kwindawo yayo ngobude.
• Ubukho bokumiselwa kwemifanekiso kunye nokuguqulwa kwedatha kuphela kwiplanethi ye-2D yesikrini, kubandakanya ukubakho kokutshintsha phakathi kweenqwelomoya ezizimeleyo ze-3D.
Isakhono sokugcina kunye nokufunda i-geometry epheleleyo yeenkqubo zecadic (isijikelezi-langa kunye nendawo) kwiifayile ze-DXF kunye nokusebenza ngokulandela umda kwifayile ye-DXF.
Umsebenzi wokufunda kunye nokusebenza ngokulandela umkhondo wefayile yeDXF.
Umsebenzi ukuguqula imigoqo yenkqubo ibe ngumkhondo.
• Ubukho bokufunda imiqondiso yophahla evela kwinkqubo ye-ArCADia kunye nokuzala okuzenzekelayo kwezakhiwo zophahla.
• Unokwenzeka lwenkcazo echanekileyo yolungelelwaniso lweekhibhodi ezinxulumene nenkqubo yeCartesian kunye neplash.
Ukubanakho ukufaka izixhobo zokubonisa eziboniswe ecaleni kwesikhombisi ngemisebenzi yegrafu.
Isakhono sokutshintsha phakathi kwembonakalo kunye noqikelelo lwethambo.
• Ukusetyenziswa kwenkqubo yokusondeza kunye nephedi kunye nokujikeleza kwayo simahla ngexesha lokwenyani.
• Ubukho beendlela zokuzoba umatshini kusetyenziswa iipolylines ezineendawo zokuhlala ezisisigxina okanye ezihambayo.
• Indlela yokulandela umkhondo xa usazisa ngezinto ezintsha kwinkqubo.
• Izixhobo zenziwe imodeli kwizicelo ze-CAD ngokulungelelanisa iindawo ezikhoyo, indawo embindini kwimivalo, indawo ezihlala kuyo kunye neendawo ezikufuphi nemivalo, iindawo zendlela, iindawo zothambelo, amanqaku omthwalo, kunye namanqaku kwigridi echaziweyo, kubandakanya nezinto zokulandela umkhondo.
• Ubukho bokongeza izinto kwindlela entsha ye- "Ortho" kwenye yezona zinto ziphambili, nakwindlela yendawo.
• Ukuba nako kokuvula ukujonga kuqala kwe-2D ibha efakiweyo kwindlela yokufakelwa kwezinto ezisicaba kunye nomhlaba.
Isakhono sokutshixa umzobo obonakalayo kuyo nayiphi na inkqubo yokuhlelwa.
• Ubukho bokutshintsha kweendawo, inkxaso, imigoqo kunye nemithwalo ngokwamaqela.
Isakhono sokuhlela izinto zenkqubo kwinqanaba lomthi leprojekthi.
I-CAD yokufaka idatha yokuhlela esetyenziselwa izixhobo ezifana noku: ukukopa, ukukopa ezininzi kwicala lesibonisi esichaziweyo (kunye okanye ngaphandle kohlengahlengiso kunye okanye ngaphandle kwesikali), imbuyekezo, ukuhambisa, ukolula, ukususwa kwemivalo kunye neendawo , ujikelezo, isipili, ulungelelwaniso lwendlela, lungisa kwaye ubuyise utshintsho.
P Ubukho bokuqinisa naliphi na iqela lebar kwi-node, kunye nemivalo kunye nezixhasi.
• Ubukho bemivalo yamaqela kunye nokukhetha ngokulula amaqela eebar.
• Ubukho bokukhetha imivalo kuyo nayiphi na iplanethi ekhethiweyo.
Isakhono sokwahlulahlula isithuba phakathi kweendawo kunye nokugcina umthwalo waso.
• Ubukho bokudibanisa imivalo ye-collinear kunye nokugcina imithwalo yabo.
• Ubukho bokukopa inxenye okanye inkqubo egcweleyo kwibhodi eqhotyoshwayo phakathi koyilo obahlukileyo kuyilo olunye.
• Ubukho bokumisela, ukujikeleza nokutshintsha idilesi yendawo yengingqi yebar.
Ukusetyenziswa komsebenzi ukulinganisa ubude kunye ne-engile phakathi kwebar ezimbini zenkqubo kuyilo.
• Umphathi weprofayile yebha yokubandakanya ilayibrari yentsimbi, ikhonkrithi eyomeleziweyo kunye neeprofayili zokhuni, kunye nokukwazi ukwandiswa kwethala leencwadi ngeprofayile yomsebenzisi kunye nokufaka iiprofayili kuyilo oluthile.
Isakhono sokwenza amacandelo enqamlezo enqamlezileyo nakweyiphi na imilo, sika iindawo ezinqamlezayo, ikopi, ujikeleze kwaye ushenxise amacandelo anqamlezayo.
Ubukho bokulungelelanisa ngokuzenzekelayo izitshixo eziphambili zenkqubo yendawo enomgqomo.
Isakhono sokufunda icandelo lejometri yomnqamlezo kwibhar kwifayile ye-DXF.
Ukubalwa ngokuzenzekelayo kwazo zonke iipropathi zecandelo lomnqamlezo kwinkqubo yendawo kunye ne-axis ephambili, kubandakanya ukumiselwa kwentloko yomnqamlezo.
• Ukuba nako kokuchaza kunye nokubala imivalo yejometri eguquguqukayo.
Ukuqulunqwa kwamaxesha amileyo alo naliphi na icandelo le-abscissa yecandelo lomnqamlezo kwinkqubo ephambili yentsimbi.
• Amathala eencwadi eprinta achazwe ngaphambili kwifayile ye-XML, equkethe: intsimbi, umthi oqinileyo kunye ne-glued laminate, ialuminium, ikhonkrithi; Kukho amathuba okugcina nokulungisa izixhobo zomsebenzisi.
• Ubukho bokudala iinkqubo eziyinxalenye yempahla.
• Imithwalo: amandla ahlanganisiweyo, amaxesha ahlanganisiweyo, imithwalo eqhubekayo, amaxesha aqhubekayo, ukugqithisa kwentonga, umohluko weqondo lokushisa, amandla endawo axhonyiweyo, ukuxhaswa kwenkxaso, ukujikeleza kwenkxaso.
• Imithwalo esekwe kumaqela emithwalo rhoqo kunye eguquguqukayo (imithwalo enye kunye emininzi), kubandakanya amathuba okucacisa ii-coefficients zemithwalo.
Isakhono sokuseta amaqela emithwalo nganye njengabasebenzayo okanye abangasebenziyo (abangaqwalaselwa ngexesha lokubala), abonakalayo nabangabonakaliyo.
• Ubukho bokuhlela imithwalo yeebha kunye neenombolo ngokwamaqela.
• Ubukho bokumisela kunye nokuhlela iyunifomu kunye nemithwalo yomphezulu wetrapezoidal kunye nokwabiwa kwemithwalo ephezulu kwibar yebhasi kunye nemithwalo ye-node.
Ukuchongwa kwemithwalo ephindwe kabini, kubandakanya nokukhupha okanye ukudibanisa iikopi.
• Ubukho bokumisela, ukubala kunye nokubonisa iziphumo zamaqela achaziweyo emithwalo yefowuni.
Isakhono sokucacisa ubudlelwane phakathi kwamaqela omthwalo asetyenziselwa ukwakha iphakheji, kubandakanya ukuqinisekiswa ngokuzenzekelayo kokuchaneka kwayo.
• Ubukho bokumisela ukudityaniswa kwabasebenzisi abongezelelweyo.
• Ubukho bokuvumela kunye nokukhubaza umsebenzi weendibaniselwano ezichaziweyo.
Isakhono sokwenza kunye nokugcina imbonakalo yomntu kwinkqubo yoyilo.
• Ubukho bokufakelwa kobungakanani kuyilo: ngokuthe nkqo, ngokuthe tye nangokufana.
• Ukuqwalaselwa ngokuzenzekelayo kwesisindo esithile.
• Iseti epheleleyo yeentlobo zenkxaso, kubandakanya ukubakho kokuchazwa kokuqina kwazo.
• Abavelisi bezakhiwo zeparametri: iifreyimu ezikumxantathu womhlaba, iiarches (parabolic kunye nesangqa), ii-trusses ezinemigangatho emibini, imiqadi yophahla eyenziwe ngomthi, iinqaba zethambeka kunye neengubo ze-geodetic.
Isakhono sokuchaza imitya yohlobo lwekhebula kunye nokubala okungasetyenziswanga kweenkqubo eziqukethe iintambo zamaqela omthwalo ngamnye kunye nokudityaniswa okuchaziweyo.
• Ukuba nokwenzeka kokuveliswa kwemivalo eccentricity kwinkqubo (enye okanye emacala mabini) ngomgca oshiyekileyo oxhuqulwe ngokudibeneyo.
Isakhono sokukhetha amaqela emivalo, imilinganiselo yobungakanani kunye nemithwalo ngokuthe ngqo kwinqanaba lomthi weprojekthi.
Isakhono sokucoca nokukhetha uhlobo lweprojekthi yento nganye, nje ukuba iiparameter zecebo lokucoca zisetelwe.
Isakhono sokucoca kunye nokuqinisekisa imodeli yoyilo olwenziweyo.
Iziphumo zeqela ngalinye lomthwalo, nayiphi na indibaniselwano yamaqela omthwalo kunye nokudityaniswa okuchaziweyo, kunye nemvulophu ebalwe ngokuzenzekelayo yinkqubo.
Umsebenzi wokugcina iziphumo zobalo oludlulileyo lokugqibela kunye nokunciphisa ubungakanani benkqubo.
• Amandla okwenza ukubalwa kwe-static ngokokuma kwethiyori yomyalelo wesibini.
• Ubukho bokubonakalisa umkhombandlela kunye nexabiso leendlela zokuphendula ezixhaswayo.
• Imithetho eyahlukeneyo yenkcazo yamaqela kunye nokusebenzisana, kunye nolwakhiwo ngokuzenzekelayo lwezibalo ezihlanganisiweyo ngokubalwa kwe-PN-EN ye-Euro.
Ukuqulunqwa kwemvulophu egqibeleleyo ye voltage eqhelekileyo kunye nokubalwa kweethambeksi eliqhelekileyo lamaqela kunye nenani lomthwalo, indibaniselwano kunye namaqela emvulophu.
• Ubukho bokubonisa umzobo oyi-tuli owenza isiphelo esibonisiweyo secandelo.
Ukuchongwa kwendlela eqhelekileyo, emide kunye nokwehla kwengcinezelo nangaliphi na ixesha lecandelo lomnqamlezo.
• Indawo yoxinzelelo oluphezulu oluphezulu kwicandelo lokuwela ibar.
• Ukujonga kuqala ngokukhawuleza ulwakhiwo kumbono we-3D ovumela ukukhethwa kwemivalo enexinzelelo eliqhelekileyo elivumelekileyo.
• Ubukho bokubonisa iziphumo zamandla angaphakathi, ukuphenduka, isiphene kunye noxinzelelo oluqhelekileyo kwiscreen sokujonga (kuyo yonke inkqubo kunye nebha enye).
Umsebenzi ukubonisa kunye nokufihla amaxabiso amandla angaphakathi, uxinzelelo kunye nokugxothwa kwimizobo yehlabathi, kwizikrini zemifanekiso ebonisa amaxabiso agqamileyo kunye namanqaku omsebenzisi akhethwe kwithebhu yesiphumo.
Umsebenzi wokwenza ingxelo ye-RTF evela kumfanekiso obonakalayo wescreen senkqubo, kubandakanya imizobo yamandla angaphakathi, uxinzelelo kunye nokugxothwa okanye ukuphawulwa ngokudibeneyo, iziphumo kwiziphumo kunye nokunciphisa isithuba.
• Ukubakho kokufihla icandelo lesakhiwo yoyilo kuhlelo lwedatha kunye nenqanaba lokubonwa.
Ukubonwa kwengqondo yenkqubo yenkqubo kusetyenziswa oopopayi ngexesha lokwenyani.
Ukuyilwa kweengxelo ezahlukeneyo eziqulathwe ziziphumo zetafile kunye nemizobo kwifomathi ye-RTF.
Ukubanakho ukuseka naluphi na udidi lwengxelo kunye nohlobo lwengxelo (imithombo yolwazi, izakhelo, njl njl).
Uluhlu olubanzi lwamathuba okuguqula ujongano, inkqubo kunye noseto lweprojekthi, kunye nokunikezelwa kweenkcukacha kunye neziphumo.
Ukubanakho ukutshintsha inguqulelo yolwimi lwenkqubo (isiPolish, isiNgesi, isiJamani) ngexesha lenkqubo.
Ukutshintshwa kwezibalo eziguquliweyo kwiimfuno zesinyithi, umthi kunye neziseko zekhonkrithi eziqinisiweyo.
Ukubanakho ukudala amaqela eenkxaso kunye nokucima ubungakanani besiseko.
Ukusebenzisana ngokubambisana kwiimodyuli zokunciphisa i-EuroStal, i-EuroŻelbet, i-EuroStopa, i-EuroDrewno.
Ukuqulunqwa kwepakeji yokutenxa yomntu ngamnye kunye nokudityaniswa kobungakanani.
• Ubukho bokuzenzekelayo kokudibana ngokuzenzekelayo kwenkqubo yonke yegalelo ngokusekwe kudidi lobungakanani olunikezelwe kumaqela ebhasi kunye nezinto ezichaziweyo zobungakanani.
Umsebenzi ukujonga uhlaziyo lwenkqubo entsha.
[isihloko esilandelayo =] ArCADia EuroStal »
INet: € 335,00
Imodyuli yokulinganisa yezinto ezisisiseko zentsimbi ngokwenqanaba: PN-EN 1993-1-1 i-Eurocode 3: NgoJuni 2006. Inkqubo ijongisisa umthamo wezinto ezifanelekileyo kwezi ntlobo zecandelo lomnqamlezo:
• Icandelo lama-I
Iziqendu zephuliwe eqengqelekayo,
• Ukuqengqeleka kumacandelo T,
• ukujikeleza kwamacandelo C,
• ii-angles ezilinganayo nezingalinganiyo eziphezulu,
• Iingqayi ezingqengqiwe, isikwere kunye nesangqa
• naliphi na icandelo le-monosymmetric I-welded,
• nawaphi na amacandelo e-T e-unisymmetric T-weld
• Amacandelo e-weld of the box (mono-symmetrical),
• Ixande, isikwere kunye nesetyhula kubanda.
Ngokuhambelana nemithetho equlathwe kumgangatho we-PN-EN 1993-1-1, inkqubo yokwenza ubungakanani iqinisekisa ubungakanani bomthwalo wecandelo lomnqamlezo, kuthathelwa ingqalelo uzinzo lwecandelo lomnqamlezo kunye nokuvumela uzinzo ngokubanzi into.
Njengenxalenye yokuqinisekiswa komthamo wecandelo lomnqamlezo, oku kulandelayo kucacisiwe:
• umthamo owandisiweyo,
• unyanzeliso umthwalo
• Umthamo wokugoba,
• ukusika umthwalo
• Umthamo wokugoba kunye nokucheba,
• amandla okutsala ngokugoba ngamandla amade,
• Umthamo wokutsala kunye nokucheba ngamandla amade.
Xa uqinisekisa uzinzo lwehlabathi, makuchazwe oku kulandelayo:
• ubungakanani bokulayisha kwezinto ezilungiselelwe uxinzelelo,
• Ubungakanani bokubopha into ethwele izinto ezigoba,
• umthamo wokunxibelelana osebenzayo wezinto ezigobileyo kunye ezixinzelelweyo.
INet: € 260,00
Imodyuli yokunciphisa imilinganiselo ye-EuroStopa yenzelwe ukuyila iziseko zomhlaba ngokwe-PN-EN 1997-1 i-Eroocode 7 kwinkqubo ye-3D R3D3-RAMA phantsi kwesimo esinzima. Uveliswa ngohlobo lofakelo oluhlanganiswe kwinkqubo ye-3D R3D3-RAMA yokubala okumileyo, kufuna ilayisensi eyahlukileyo. Okwangoku, i-R3D3-RAMA 3D kunye ne-EuroStopa inokusebenza kulungelelwaniso ezimbini:
• Ngokwahlukileyo, njengenkqubo yokubala kuphela (imodyuli ye-EuroStopa isebenza kuphela kwinguqulelo yedemo) ilayisensi ye-R3D3-RAMA 3D iyadingeka koku.
• Ngokunxulumene nemodyuli ye-EuroStopa, njengenkqubo yokubala okumiselweyo kunye nokunciphisa indawo enikwe isiseko, ilayisensi ye-R3D3-RAMA 3D kunye ne-EuroStopa iyafuneka.
Inkqubo yokuhlela kunye nokujonga iifayile zengxelo (kwifomathi ye-RTF) efana ne-MS Word (2003 nangaphezulu) okanye indawo yokujonga iMMS Word kufuneka ifakwe kwisistim ukuze isebenze ngokuchanekileyo nangokugqibeleleyo kwimodyuli ye-EuroStopa.
Ngokubanzi, inkqubo inokuqhuba ukubala okulandelayo kunye nokungqinisisa:
• Ukuqinisekiswa komthamo womhlaba emhlabeni macala omabini, kwinqanaba lesiseko kunye nomphezulu womaleko womhlaba ngamnye kuzo zonke iindawo zokulayisha ngokwePN-EN 1997-1 Eurocode 7 standard.
Ukuqinisekiswa kwemeko esemgangathweni ngokubhekisele kubungakanani be-eccentricity.
• Ubungakanani besiseko sebhloko sokutshintsha esilungiswe luxinzelelo lomhlaba, sibalwa ngoxinzelelo olugqithisileyo kwicala le-X kunye ne-YCC (ACC. PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2), kubandakanya ukuqinisekiswa kwemeko yokwakhiwa. ukuqiniswa ubuncinci kunye nokukhethwa ngokufanelekileyo kweebha.
• Ukuxhathisa ukujikeleza kuqinisekiswa ngokulandelelana kwemeko yokuhambisa.
Ukuchasa ukuqhuba kujongwa kumacandelo anqamlezayo e-fulcrum.
Ukubala intsingiselo yendawo yokuhlala esisiseko kunye nesekondari yebhloko yesiseko kwisakhelo somgangatho ongaphantsi kwayo yonke imigangatho yokusebenzisa kusetyenziswa indlela yoxinzelelo (ehambelana ne-Erocode).
• Ubungakanani bokuqiniswa ngokuthe nkqo kunye nothe tyaba lwenziwa ngenkxaso yohlobo lwentsimbi, kubandakanya ukhetho olufanelekileyo lwemivalo.
Ukongeza kuluhlu olubanzi lokubala, imodyuli ibonelela ngezi zinto zilandelayo:
• Ukufakwa kumgangatho wamanzi emhlabeni wepiezometric.
• Ivumela ukuthathelwa ingqalelo kwezinto ezongezelelekileyo, xa iimpendulo zikwisiseko.
• Ivumela ukubalwa kokuphendula okuthe nkqo kwenkxaso (ukulungelelana kukaWinkler).
• Kuyinto ergonomic kwaye kulula ukuyisebenzisa.
INet: € 348,00
Imodyuli yokunciphisa ubungakanani be-EuroŻelbet yenzelwe ukunciphisa ubungakanani bophahla kunye nolwakhiwo lweekhonkrithi ezinomhlaba ngokungqinelana ne-PN-EN 1992-1-1 i-Eurocode 2: kaSeptemba ka-2008 esemgangathweni kwinkqubo ye-3D R3D3-RAMA kwiplanethi nangaphantsi. Ubume bokuhlawula. Imodyuli iveliswa ngohlobo lofakelo oluhlanganiswe kwinkqubo ye-3D R3D3-RAMA yokubala okumileyo, kufuna ilayisensi eyahlukileyo.
Njengenxalenye yokungqinisisa imeko yomda wokugqibela kunye nenkonzo, le nkqubo yenza ukubalwa okulandelayo:
Ukubalwa kwendawo yokomeleza ephambili yokuhanjiswa kwebhanti, ukunyanzeliswa kwe-eccentric, uxinzelelo lwe-eccentric kunye ne-torsion, kubandakanywa nezona zinto zibambekayo.
Ukubala ubalo lwendibaniselwano (ukujijisa) kwecandelo le-shear kunye ne-torsionctional torsion.
Ukubalwa kokuphambukiswa kwetairectional yendawo yokwaphuka.
Ezi ndidi zilandelayo zecandelo lomnqamlezo zinomda kule nkqubo: isetyhula, uxande, i-angular, icandelo le-T, icandelo C, icandelo le-C kunye ne-Z.
• Umsebenzisi unokwenza nayiphi na inkcazo yohlobo lokunciphisa (lokugubungela ubumbeko olusisiseko lweeparamitha zokomeleza), ezinokusetyenziswa nakuluphi uyilo.
Uluhlu olubanzi lweentlobo ezisisiseko zokuqinisisa ezisisiseko onokuthi ukhethe kuzo: ezona zinto zibalaseleyo, ziyafana, zilungelelaniswe, zaza zahanjiswa ngemigca emibini, zanikwa umda kuphela wecandelo lomnqamlezo.
• Uhlengahlengiso oluzenzekelayo lwokhuseleko lokuqinisa olusekwe kwiklasi yokuvezwa.
Ukwahlula izinto zekhonkrithi ezomeleziweyo kwinani elikhethiweyo lemimandla yokuqiniswa okufanayo kwesisiseko kunye noguquguqukayo.
Ukuqwalaselwa kwemeko ezisisiseko zesakhiwo sokuhanjiswa kokuqiniswa kwezinto.
• Ukukhetha ngokuzenzekelayo inani leendawo zokuqinisa i-shear.
• Ukuqinisekiswa okuzenzekelayo kwemvulophu yangaphandle yamandla kuwo onke amanqaku endawo eyoliswayo.
• Ingxelo yokunciphisa ubungakanani bokubala okwenziwa ngesandla ezinazo zonke iziphumo eziphakathi kwifomathi ye-RTF (MS Word).
[isihloko esilandelayo =] ArCADia EuroDrewno »
INet: € 268,00
Yintoni i-EuroDrewno 3D?
Imodyuli ingasetyenziselwa ukunciphisa umda weplani kunye namanqanaba okwahlula iinkuni ngamacandelo omnqamlezo oxinano oluqinileyo kunye ne-lamised glued ngokwe-PN-EN 1995-1-1 imigangatho ukusukela ngo-2010 ekwimeko yoxinzelelo kunye nokuthathela ingqalelo. bala umzuzu we-torsional.
• Umsebenzisi unokwenza naluphi na uhlobo lwenkcazo yokunciphisa ubukhulu (ii-coefficients, indawo ezinobuthakathaka yecandelo, ukuphambuka kunye nezinye iiparamitha), ezinokusetyenziswa nakuluphi uyilo.
• Ukulungelelaniswa kokulungelelaniswa kwe-kmod kuthathwa njengokuzenzekelayo kusekwe kwiqela lomthwalo elinexesha elifutshane kakhulu lempembelelo kulwakhiwo phantsi kodibaniso olunikiweyo, okanye ngesandla ngokubhekisele kwizigqibo zomsebenzisi.
Ithuba lokunciphisa umda wokuphatha umntu ngamnye, iqela leemivalo ezihambelana ne-collinear bar kunye ne-collinear bar (ngokwahluka kwe-angle engaphantsi kwe-5 degrees).
• Ukuqinisekiswa okuzenzekelayo kwemvulophu yamandla angaphakathi kuwo onke amanqaku endawo eyoliswayo.
• Uxinzelelo oluqhelekileyo kunye nolungqinayo luqinisekisiwe kwicandelo lezinto ezinqamlezayo.
• Ubungakanani bayo nayiphi na indawo ebonisiweyo inokuqinisekiswa kuzo zonke iimvulophu kunye nemvulophu enye ekhethiweyo.
Le nkqubo imisa okona kuphambuka kuphambili kunye nokususwa kwezinto kwinto ekwimeko yoxinzelelo ecingelwayo, kubandakanya nokuvumela amandla okuhamba kunye nokuthintelwa kwemikhosi ye shear kunye nokuthelekiswa kwamaxabiso avumelekileyo.
• Ingxelo yokwenza ubungakanani ngendlela yokubala okwenziwe ngesandla ezinazo zonke iziphumo eziphakathi kwifomathi ye-RTF (MS Word).
INet: € 321,00
[isihloko esilandelayo =] I-IntelliSoft ye-IntelliCAD]
I-INTERsoft-INTELLICAD yinguqulelo entsha yesoftware ye-CAD yokwakha ama-2D kunye namaxwebhu obuchwephesha be-3D, ebekhona iminyaka. Inezixhobo ezinamandla zokwenza umzobo ngqo. Umzobo omtsha wegrafiki uqinisekisa umsebenzi onomdla kwaye ungaphazamisi umkhombisi we-CAD. Isoftware inoluhlu olubanzi lwezinto ezisebenzayo ukugcina kunye nokulayisha iifayile ze-DWG, ukusuka kuhlobo lwakudala oluyi-2,5 ukuya kwifomathi yamva nje ye-DWG ka-2013.I-INTERsoft-INTELLICAD isebenza ngezixhobo ezininzi, ezinje nge: StalCAD, ŻelbetCAD, InstalCAD, INTERsoft- I-PRZEDMIAR, kubandakanya iimodyuli zenkqubo yeArCADia yokwenza imodeli ye-BIM epheleleyo.
Ukusebenza kwimiqolo, umgca wokuyalela, ukwenziwa ngokwezifiso kokumiselweyo (imiyalelo, iibar zesixhobo, iindlela ezimfutshane kunye nezinto ezingasetyenziswayo), ukhetho lokungenisa imigca, ukuguqula isitayile kunye nokunciphisa imilinganiselo zizinto eziphambili zesoftware. Ukongeza, ivumela ukuphuculwa kunye nokulungiswa kwamaxwebhu kwi-2D kunye ne-3D, ukulayisha iziseko ezi-raster (BMP, JPG, TIF kunye ne-PNG), inkcazo nge-TrueType okanye ifonti ye-SHX, umgca kunye nomda we-angular ngokurekhodwa kwesitayile, ukugcinwa kunye nokuphathwa kwesinyibiliko ( kunye neempawu), ukulayisha usetyenziso olugcinwe kwi-LISP kunye ne-SDS. Kukho ukhetho lokusebenza kunye nokwenziwa, ukukhanyisa kunye nokuhambisa kumaxwebhu e-3D.
IZIQULATHO ZESIFUNDO SE-INTERSoft-INTELLICAD SOFTWARE
Besililungu le-IntelliCAD Technology Consortium (ITC) ukusukela ngo-2002. Abathathi-nxaxheba kule ngxowa-mali engenzi nzuzo yongamela uphuhliso lwesoftware ye-CAD, eyayiyindlela yokuqala yokwenyani kwisoftware ye-AutoCAD. Sisodwa siphuhlisa kwaye sabelane ngezisombululo ze-IT, eziphunyezwe kwikhowudi yomthombo eqhelekileyo.
Uninzi lweenkampani, kubandakanya ezethu, zisebenzisa esi sixhobo njengenjini yemizobo kwizicelo ezizodwa. Imveliso yethu yeflegi, iArCADia BIM inkqubo ye-multidisciplinary nayo isebenzisa izisombululo ze-IntelliCAD.
Uphuhliso olusekwe kwitekhnoloji ye-BIM, ngaphandle kwamathandabuzo, ikamva elingenakufikeleleka kumzi-mveliso wokwakha, nangona kunjalo, njengoko besibonile, isidingo sokusebenzisa isixhobo seCAD esilula kunye nehlabathi sihlala sikhona. Ukuzama ukwanelisa le mfuno, siye saqulunqa isoftware ye-INTELLICAD. Njengomphuhlisi wesoftware, asinokwazi kuphela ukubumba eso sicelo kodwa sikwabeka ixabiso laso, ke, ngakumbi iinjineli zasePoland, sakwazi ukubeka iimeko ezifanelekileyo zokuthenga.
Ngokuthenga esi sisombululo, uvula indlela ngokwakho kwinguqu elula kwilizwe lobugcisa beBIM, xa ubona kufanelekile. ”
Umongameli we-INTERsoft & ArCADiasoft
IZIXHOBO ZOBUCHULE be-INTERsoft-INTELLICAD:
Ukudalwa kwemizobo emi-2D kunye ne-3D ngokuzoba nokuguqula ngokupheleleyo zonke izinto.
• Ukwazi ukufunda i-ACIS eqinileyo (ngaphandle kobuchule bokwenza kunye nokuhlela ngokupheleleyo).
• Ukukhetha umboniso wokukhetha kunye nokunikezelwa kwendlela entsha yokuzoba.
• Ukufunda kunye nokuhlela imifanekiso ye-bitmap (umzekelo, imvelaphi yejodetic) njenge: Iifayile zeJPG, iTIF, BMP, GIF kunye nePNG.
Ukufakwa kunye nenkcazo yeelayibrari zeesimboli, iibhloko, izicatshulwa ezilula nezintsonkothileyo (i-SHX kunye nohlobo lweNcwadi eyiNgcombolo).
Ukulinganisa obelwe izinto: umgca kunye ne-engile, kunokwenzeka ukudala iitayile zabasebenzisi.
• Ukuguqula ngokuthe ngqo ngokuchaza zonke iiparamitha zokuprinta.
Ukulinganisa okuzenzekelayo komgama, indawo kunye nokulungelelanisa uhlengahlengiso.
Ukukhuphela ngaphandle kwiifayile zePDF.
Ukukhuphela iifayile ze-STL.
Uluhlu olubanzi lweendlela zoku hatch.
Ukufikelela ngokuthe ngqo kuncedo lweenkqubo malunga nemenyu yoncedo.
• Fikelela ngokuthe ngqo kwincwadi yomsebenzisi kwimenyu yoncedo.
• Ukuhambelana ngokuhambelana nezitayile ezibonakalayo.
Izitayile ezibanzi ezongeziweyo.
Isithuba sephepha siphethe ukujonga okungasekwere.
Isakhono sokubonisa isitayile esishicilelweyo endaweni yamaphepha.
Inkxaso yokudityaniswa kwemilinganiselo.
• Ukuhambelana kunye neendlela ezihambelana nemifanekiso kunye namakhonkco angaphandle.
• Ukuphuculwa kokuphathwa kweebhloko, imbonakalo, ubukhulu kunye nezitayile zetekisi.
• Iifestile ezininzi zinokuvulwa ngemibono eyahlukeneyo kunye nobeko.
Ulawulo lwe-DWG yeFOMAT
• I-INTERsoft-INTELLICAD iphatha ifomathi ye-DWG ngaphandle kokwenza naluphi na uguqulelo kwimizobo ye-AutoCAD efundwayo kwaye egcinwe ngaphandle kokuphambuka.
Ukufundwa kunye nokugcinwa kwezicwangciso kwifomathi ye-AutoCAD ukusuka kwiinguqulelo 2,5 ukuya kowama-2013.
• Ukuzoba kwimigca efihliweyo kunye nemowudi yokufaka ngexesha lokwenyani.
• Umboniso womboniso kunye neegradi.
Iimboniselo ezingezizo zesikwere.
• Vimba umlinganisi kunye nekhonkco langaphandle.
• Ukuboniswa kwezinto kwi-ADT kunye ne-Civil 3D.
• Inkxaso yefomathi ye-DWF kunye ne-DGN.
IMITHETHO YENTLANGANISO YOKUZENZA:
• Igridi, imisebenzi yokuzoba i-orthogonal, ukulandelelwa komgangatho.
Ukuphuculwa kokuqwalaselwa kwamanqaku afanelekileyo (isiseko), umz. Ukulungiselela amaziko okubhalela, iindawo zokugcina kunye neendawo zendlela.
• Jonga kwaye ulungise umsebenzi owonakeleyo wokuzoba.
• Ukuhambahamba kwiiprojekthi, ukubonwa kwayo kunokwenzeka ngenxa yazo zonke iindlela zoom, ukuphinda wenzwe kunye nokutsala kweenqwelomoya, kunye nokujikeleza kwezinto kwezinto ze-3D.
Imigca yokuyalela kunye nokwenza kwabo, ukuthotyelwa ngokupheleleyo kweefomathi zefayile (DWG, DWF, DWT kunye ne-DXF).
Izihloko, iimpawu, ukukhuzwa.
Ipaneli yeePropathi eziShiyiweyo ..
UKWAMKELWA KWENKQUBO YENKQUBO:
• Ukulungiswa kwemenyu ephezulu, iibar zesixhobo, ibar yendawo yokuyalela kunye nezindlela ezimfutshane.
• Isimo sokusebenza kwescreen: umbala kunye nobungakanani bokuwela intambo, njl njl.
• Inkqubo yokuguqula ulwimi lwe-LISP iyenziwa kwaye ivumela ukufundwa kwezicelo ezibhalwe ngolu lwimi.
Imisebenzi eyongeziweyo yenkqubo inokwandiswa ngokufunda ii-SDS ngaphezulu.
• Inkxaso yemenyu yehla kwimiyalelo efuduswe kunye nesibonisi icon.
• Iphaneli yeZinto eziShiyekileyo.
• I-INTERsoft -INTELLICAD Explorer inikezela ii-icon ezingama-24, inkxaso yolwakhiwo kunye nokhetho oluninzi, ii-icons kuludwe kunye nokulula kokusebenza.
• Inkxaso yokuchongwa kwesixhobo ngqo kwi-bar yesiqhelo.
• I-ArCADiasoft lilungu le-ITC. Ezinye iikhowudi zomthombo ze-IntelliCAD 8 zisetyenzisiwe kwinkqubo.
[isihloko esilandelayo =
I-ArCon - Amathala eencwadi asezantsi
Izinto zethala leencwadi ze-3D iArCon-Igadi
INet: € 49,00
IArcon yegadi ye-3D ilayibrari yezinto ezingama-600 ezisetyenziselwa ukulungisa imeko yesi sakhiwo. Inezinto zokwakhiwa kwegadi (izindlu zasehlotyeni, iingcango, iibhlorho, izithintelo, i-pergolas, izindlu zesolar), izibane, izixhobo zefanitshala yegadi, imithi nezityalo, kunye neemoto.
Izinto zethala leencwadi le-3D i-ArCon-City
Ithala leencwadi leArcon City sesinye isixhobo esixhasa uyilo kwisoftware yeArcon. Inezinto ezingaphezu kwama-300 ezinxulumene nokucwangciswa edolophini, phakathi kwezinye: iimoto, imiqondiso yezithuthi, izithuthi zikawonkewonke, iindawo zokutsala umnxeba, iintsika zezibonda, njl. ukuba, ukongeza kumbono obonakalayo wesakhiwo ngokwawo, vumela ukuba uhlanganiswe kuseto lokwenyani. Sebenzisa izinto, unokucwangcisa imeko ngqo okanye uyile igumbi liphela.
I-URL ye-PDF: http://www.arcadiasoft.eu/pdf/Library_o2c_ArConCity.pdf
[isihloko esilandelayo =] I-Arcon Interiors »
Izinto zethala leencwadi ze-3D iArCon-Interiors
INet: € 79,00
Ithala leencwadi i-ArCon Interiors Library inezinto ezingaphezu kwama-700, phakathi kwezinye izinto, izinto zokungena ngaphakathi: ifenitshala, izinto zekhitshini kunye nezongezo, iifestile zangasese, izinto ezintsha zeofisi, abagcini be-LCD, abashicileli abatsha, njl.
Izinto zethala leencwadi ze-3D i-ArCon-Schenker
INet: € 69,00
I-3D Planet Interior evela kwinkampani yeSchenker yandisa amathala e-Arcon ngokongeza izinto ezingama-800. Izinto zahlulwe zangamacandelo ali-13 (iikhathalogu) ezilungiselelwe ulungiselelo lwangaphakathi kunye nokusingqongileyo kwesakhiwo. Izinto ezinomdla kakhulu kwigumbi lokuhlambela kunye neekhathalogu zasekhitshini.
Post edlulileyo«Edlulileyo Zonke iindaba ezivela kwi-QGIS
Post Next I-EOS ikuvumela ukuba wenze imisebenzi yokucwangcisa umfanekiso kwisiphequluliOkulandelayo "